Porn-related ED6၏ပုံပြင်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - အပိုင်း ၈ တွဲ
Porn-related ED6၏ပုံပြင်များသည်အပိုင်း ၈ ပိုင်းပါသောပုံပြင်များဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသားများမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ဤ porn-induced ED thread နှင့် forum section ကိုကြည့်ပါ။
ငါ့ရည်းစားနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ငါ 37 အသက်အနှစ်ဖြစ်၏။ ငါ 14 အတွက်အသက်အရွယ် 1988 မှာ masturbate မှစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအသက် ၂၀ ကျော်ခါစ၊ ငါပုံမှန်လိင်အသက်တာကိုစောင့်ရှောက်။ ငါအမြဲတမ်းအမျိုးသမီးတွေအိပ်ရာနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်။ gf ၏စုံတွဲတစ်တွဲ၊ တစ်ညတာစုံသည်အစောင့်အကြပ်များကိုရပ်သည်။ ငါ့မှာပြproblemနာမရှိဘူး၊ စိုက်ထူတယ်။
အခါသမယတွင်သူတို့ကိုငါမှ masturbate တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူစာအုပ်စတိုးဆိုင်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုငှားမယ်။ တစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ဘူး။ 2004 ၌ငါ (ထိုအချိန်က 30 ခဲ့), ငါ့အိမ်မှာဘရော့ဘန်းအင်တာနက်ကို installed ။ ငါမကြာမီ porn အမျိုးအစားအားလုံးကိုဖို့ masturbating ခဲ့သည်။ Swing စုံတွဲများ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ Swinger ဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဤရွေ့ကားမကြာခဏ 45-1 နာရီအစည်းအဝေးများ 2minute-3hr-4hr ပါလိမ့်မယ်။ အားလပ်ချိန်ယူပြီး, ပြီးတော့ပြန်သွား။ ငါသည်ငါ့အိမ်နှင့်ညစ်ညမ်းဖို့အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက်ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်ကိုဖူးအစဉ်အဆက်ကတည်းက MY လိင်ဘဝကိုပြည့်စုံကပ်ဘေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ငါအရမ်းကျေနပ်လောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံမှုရှိသည်။ ငါ swingers က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အီးမေးလ်ပို့ရန်လူကြီးလူကောင်းငါ့ကိုအချို့သောအကြံဥာဏ်များသည်အထိသည်အထိညစ်ညမ်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပြtheနာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ငါသူ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းစွာသူ့ကိုမေးတယ်။
မင်းရဲ့ပရိုဖိုင်းမှာမင်းကစုံတွဲအတော်များများနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသတိထားမိတယ်၊ မင်းကမင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုအတည်ပြုပြီး၊ ငါစုံတွဲလေးတွဲနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ငါမခက်ဘူးဆိုရင်ငါစိုက်ထူပြီးတဲ့နောက်ငါဟာမခက်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိုရည်များ၊ စကားပြောခြင်းနှင့်ဟိုတယ်သို့ဆက်သွားခြင်းတို့ကြောင့်အာရုံကြောများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်များမဟုတ်ပါ။ ငါလုံးဝစိတ်မလှုပ်ရှားဘူး။ ကျွန်ုပ်၏နေနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်သည် porn, pics စသည်တို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်မတွေ့ဆုံမီနေ့သို့မဟုတ်နေ့၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသလား။ စုံတွဲများ။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာလားလို့မေးပါရစေ။ ခင်ဗျားဘာအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်လဲ။ ငါတစ်ချိန်လုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါစုံတွဲတစ်တွဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေ့မှာငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါစိုက်ထူရတဲ့နှင့်ခက်ခဲနေဖို့မပြproblemနာရှိသည်။
မင်းရဲ့ ၃၇ နှစ်သာရှိရင်မင်းပုံတွေထဲမှာငါမြင်နိုင်တဲ့အရာကကောင်းတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်သွားအောင်ငါပြောမယ်။ မင်းရဲ့လိင်ဘဝဟာတိုက်ရိုက်ပါပဲ။ အာမခံထားသည် ကျွန်ုပ်သည် ၉၉.၉% သေချာသည်မှာသင်ပြုသည့်အတိုင်း porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြောင့်သင်၏စိုက်ထူခြင်းပြproblemနာကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းသေချာသည်။ ညစ်ညမ်းသောယောက်ျားကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ သင်ချိုသောအခါသို့မဟုတ်တစ်ခုခုနှိုးဆွသောအခါသင်ထွက်ခွာသွားသည်။ တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်အတွင်းသင်ပထမဆုံးအကြိမ်တက်ပြီးသည့်နောက်သင်သည်စိုက်ထူမှုများကိုရရှိပြီးနှစ်များတွင်သင်မခံစားခဲ့ရသောခံစားချက်ကိုစတင်ခံစားရလိမ့်မည်”
စိုက်ထူမှုမရှိခြင်းနှင့်ခက်ခဲစွာနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပြသနာများကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မော်နီတာရှေ့တွင်ထိုင်။ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရန်စိတ်စွဲလမ်းမှုအားရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်သည်။ ငါ့ကိုမှားအောင်မလုပ်နဲ့ငါလှည်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလဲကျခဲ့တယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အရုပ်ဆိုးသော၊ သွေးဆောင်မှုကကြီးမားသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည် Porn Tube လိုင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ငါကြိုးစားနေတယ် လွန်ခဲ့သော (၂) ပတ်ကဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရေချိုးခန်း၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်၊ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်လာသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်တော့အဲဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးကျန်းမာစေပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆက်ဆံကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါလိင်တူချစ်သူတွေကိုလိင်တူချစ်သူတွေဆီကနေတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကမင်းရဲ့လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသက်သေပြလိမ့်မယ်။
ငါ (ငါအချိန်တွင်တက် dial ခဲ့သော) ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာဓါတ်ပုံတွေကိုမှ 12 ခဲ့သောအခါငါ M နှင့် P ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတလေအထက်တန်းကျောင်းတက်လာတဲ့အခါကျွန်မမှာကေဘယ်ကြိုးတပ်ခဲ့တယ်၊
ကျွန်မရဲ့ ED ကကျွန်မရဲ့အထက်တန်းကျောင်းလိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါမိန်းကလေးများနှင့်အတူရှိ၏နှင့်ထမရနိုင်ဘူး။ ဒါဟာအရမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှေ့သို့အမြန်သွားပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ရှိပါပြီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကြိမ်မှ ၆ ကြိမ်၊ ကျွန်တော့်အတွက်ဘယ်လောက်လွယ်ကူသလဲဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။ ငါဟားဟား, ငါသို့ 20 ပတ်ပြန်သွားကြလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။
ငါသတိပြုမိသည့်တိုးတက်မှုများသည်နံနက်ခင်း၌အားနည်းနေသောသစ်သားဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တွင် (၅ နှစ်) ဘာမှမရှိခဲ့။ ငါနေ့ရက်ကာလ၌အနည်းငယ်ကျပန်းဆုကြေးငွေဆည်းပူးပေမယ့်သူကတူဖြစ်ဖို့အသုံးပြုသောအရာကိုမ ... အပြည့်အဝခဲယဉ်းဘူး။ ငါလူအများကဲ့သို့လုပ်သောစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
ငါကပိုပြီးစိတ်ကူးယဉ်နေတယ်ဆိုတာသတိပြုမိတယ်။ သို့သော်၎င်း၏ပိုပိုပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါစိတ်ပြတ်ပြတ်သားသားကုသမခံစားရဘူး ... ငါကပိုကောင်းတဲ့ခံစားရတယ် ... ဒါပေမယ့်ပျောက်ကင်းအောင်မလုပ်။ ငါတစ်ခုခုဖြစ်လာသည်အထိကျွန်ုပ်သည်အစီအစဉ်အစစ်အမှန်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်နိုင်မည်ဟုထင်သည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, 8 ပတ်ကြာနေကြသည်။ ကုသမှုကိုမခံယူပါနှင့်၊ အစီအစဉ်ကိုဆက်လုပ်ပါမည်။ ဒီအခြေအနေမှာအခြားမည်သူမဆို?
23, Porn-သွေးဆောင် ED, P ကို: 113 M က: 28 အို: 28
ငါ ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၃ နှစ်အရွယ်လောက်ကစပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးမကြာခင်မှာပဲ softcore porn ကိုကြည့်ပြီးဖတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါဖြောင့်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တာခဏပဲ။
လိင်တူချစ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့လိင်တူချင်းလိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်တူချင်းချစ်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်ကိုငါပြောင်းလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်နှစ်များတစ်လျှောက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သတိမထားမိဘဲငါက၎င်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်စိတ်နေစိတ်ထားပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းနှင့် ဗီဒီယို အကြားကူးပြောင်းသွားသည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောကျယ်ပြန့်သောအဆင့်တွင်စိတ်ကူးယဉ်ရန်အားပေးသောကြောင့်၊ ငါကအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပြည့်စုံစေဖို့နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကိုမကြာခဏဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်ဒီဟာကနေငါပိုပြီးရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်များလွန်းလျှင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်အချိန်ဇယားသည်နှစ်ရက်မှသုံးရက်အထိအပြည့်အ ၀ အာရုံစိုက်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာငါဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ဖူးဘူး။
ငါဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးသတိထားမိလိုက်တယ်။ သို့သော်၊ ငါပြောသောစကားသည်ညစ်ညမ်းသောအရသာသည်အခြားသူများ၏ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့အလွန်ဆိုးရွားလာသည်ဟုမထင်ပါ။ သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့နှင့်ပတ်သက်။ လျင်မြန်စွာဇာတ်လမ်းအချို့ရှိကြောင်း "ဇာတ်လမ်း" ဗီဒီယိုများအတွက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာထှတျအထိပျလိမ့်မယ်လို့သတိပြုမိကြသည်။ ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့အားပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါ။ နောက်တဖန် erotic စိတ်ကူးယဉ်မှုသည်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စံပြလိင်အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ရုံသာမကကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်၊ စံပြအချစ်ဇာတ်လမ်း၊ စံပြဘဝစသည်တို့ကိုလည်းစိတ်ကူးယဉ်စေသည်။ လူတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်၏အချစ်ဆုံးအဖော်အဖြစ်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်၏ဘဝရည်မှန်းချက်တွင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊
ငါကောလိပ်တက်တုန်းကမတူညီတဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ စတင်ချိတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါငါမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြissueနာအချို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသတိပြုမိလာတယ်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ ED အတွက်အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုမမှတ်မိခဲ့ပါ။ အရူးအမူးစွဲလမ်းနေတဲ့အချိန်မှာငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့ယောက်ျားကိုထိပ်ဆုံးနေရာရအောင်ငါနောက်ဆုံးမှာနေရာချခဲ့တယ်။ သူလုပ်ခဲ့တာပဲငါထရပ်မသွားဘူး။ ထိုအချိန်ကငါအရက်မူး, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအောက်ခြေဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှစ် ဦး စလုံးမှတက် chalked ခဲ့သည်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမရှိသေးဘူး၊ ဒါကြောင့်လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုရဲ့နိုင်ငံရေး၊ သန့်ရှင်းတဲ့လက်တွဲဖော်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ etc တွေအကြောင်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပျက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုနောက်ဆုံးတော့သူပြောလိုက်တဲ့အခါရှုံးနိမ့်သွားပြီး ဝတ်ဆင်စတင် ငါပြသနာကဘာလဲဆိုတာငါအရင်ကမကြုံခဲ့ဘူးဆိုတာမသေချာဘူးလို့ပြောတယ်
“ ဟင့်အင်း၊ ငါမှာအတူတူပဲပြproblemနာရှိတယ်။
ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်“ အောက်ခြေ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်ဟူသောအချက်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါရုတ်တရက်ထောင့်ထဲသို့ boxed boxed ခံစားရတယ်ငါနှင့်အတူစည်းကမ်းချက်များကိုမှလာ။ နှင့်ပွေ့ဖက်သကဲ့သို့ငါ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူပိတ်မိနေသလိုခံစားရတယ် ငါဟာလိင်တူချစ်သူယောက်ျားတွေကိုဖြောင့်မတ်တဲ့အမျိုးသားတွေဆီကနေ decipher လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ရ ရုံသာမကဘဲ၊ ထိပ်ဆုံးကကြိုက်နှစ်သက်ကြသောလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများကိုလည်းကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ယောက်ျားတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ပါတီပွဲတွေ၊ ကလပ်တွေမှာငါတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုစီမှာလည်းအဲဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဒီလူတွေကအမြဲတမ်းစူပါမင်ကြောင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်တာ၊
အချို့လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာကိုအကန့်အသတ်မရှိခံစားရကြောင်းအချို့သောဖတ်ရှုလေ့လာတွေ့ရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာနှင့်မပတ်သက်သောပြproblemနာရှိမရှိကျွန်ုပ်စတွေးမိသည်။ ငါယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူအောက်ဆုံးဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါဒီကြောက်ရွံ့မှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်။ ငါပိုပြီးလှည့်နှင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံခဲ့ရသည်နေစဉ်ငါအခြားမည်သည့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူရှိခဲ့ပေမယ့်ငါနေဆဲမှာအားလုံးအထွတ်အထိပ်နီးကပ်လာနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ED ကိုဝန်းရံထားတဲ့အတွေးတွေနဲ့လုံး ၀ မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်းမှာငါ့စိတ်ကိုတွေ့ရတယ်။ ငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတကယ့်အခြေအနေတွေမှာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်သေးပေမဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုစူးစမ်းခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်း၊ အသက် ၂၁ နှစ်မှာငါကကပ်ရောဂါလိုမျိုးချိတ်ဆက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ငါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကခုန်ထွက်ထွက်လူမှုရေးဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါတကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားရတယ်စတင်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုခုပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်တောင်ကုန်းများကိုပြေးတက်ခြင်းတို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါယောက်ျားတွေကိုစစ်ဆေးနေစဉ်ငါ့ရဲ့အပြုအမူကိုတကယ်ဂရုစိုက်လာတယ်။ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုပြီးသူတို့နှင့်အတူကျိန်းသေဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားသူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်တွင်သတိထားမိမှုကိုခံစားမိသကဲ့သို့နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာဆီသို့သတင်းပို့နေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်လျော်သောအာရုံကြောများမရောက်မီပျောက်ကွယ်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏မှတ်တမ်းက၎င်းသည်အမှန်ပင်နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဟုတ်ဟုဖော်ပြပြီး၎င်းသည်လုံးဝမှန်ကန်သည်။ ငါ့ကိုယ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာသူတို့ကိုငါစွဲမက်နေတာကိုအသိအမှတ်ပြုရုံပဲ။
ED နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေပြီးရှာဖွေမယ်၊ ငါ့ရဲ့ပြtoနာအတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေဘယ်တော့မှမပေါ်လာဘူး။ ငါဖတ်သမျှအကုန်လုံးသည် ED ကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိတ်ကိုအေးဆေးစေမည့်ဖြေရှင်းချက်များကိုတင်ပြလိမ့်မည်။ စိုးရိမ်စိတ်ဟာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သော်လည်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ပထမဆုံးအကြိမ်မကြိုးစားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ထိုညတွင် ED ရောဂါခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာလုံးဝပြentirelyနာမဟုတ်မှန်းငါသိတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ yourbrainonporn.com မှာဖြစ်သွားပြီးမိနစ် ၂၀ လောက်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။ အရာအားလုံးကရိုးရှင်းစွာနှိပ်ခြင်းနှင့်ရာအရပျသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြာနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစွဲလမ်းသူဖြစ်ကြောင်းရုတ်တရက်သတိပြုမိပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။
အချို့သောသူများကကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှထွက်ပေါ်လာသည်ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ အများအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသားများသည်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းမှုကိုသူတို့အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်လိုအပ်သည့်သင့်လျော်သော dopamine အလုအယက်ရရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါလိမ်မပြောဘူး၊ ခဏလောက်မစဉ်းစားမိဘူးလို့ငါမပြောတော့ဘူး။ ဒီအခြေအနေဟာငါ့အခြေအနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါမထင်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် ၃ နှစ်အတွင်းမှာငါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒီဆိုးရွားလှတဲ့ပြthroughနာကတောင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေကိုအမှတ်မထင်တွေ့ကြုံနေမိတယ်။ ငါဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မဟုတ်ဘဲတကယ့်ဘ ၀ မှာလိင်ရောချစ်တဲ့နှစ် ဦး စလုံးနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအလွယ်တကူမြင်ယောင်နိုင်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်လက်တွေ့တွင်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်များကိုသာတုန့်ပြန်ရန်လေ့ကျင့်ထားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာရသည်။ ဒီ site ရှိအခြားလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများ၏အကောင့်တွင်ကျွန်ုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပေါင်းထည့်ရန်ကောင်းမွန်သောဖြည့်စွက်မှုနှင့်ရှုထောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါငါ့အ Reboot ကစတင်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ reboot သို့တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ကဤနိဒါန်းရေးသားခဲ့သည်။
ဒီဆှေးနှေးခဘုတ်အဖွဲ့ကယ့်ကိုအကြှနျုပျကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများထွက်တွက်ဆကူညီပေးခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်မရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေဖို့တာဝန်ခံစားရတယ်။ ငါအသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါကမိတ်ဖက်တစ် ဦး နဲ့ ED တွဲနေတယ်။ ငါ ၁၀၀% နီးပါးသေချာတယ်၊ ငါ့ကိုဒါက porn ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ် (ဘာဖြစ်လို့ ၁၉ နှစ်သားမှာ ED ရှိနိုင်တာလဲ) ။
အဆိုပါကြောက်စရာအရာငါလုံးဝအားဖြင့်တစ် ဦး စွဲခဲ့သည်။ ငါတစ်ပါတ်2သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှလိင်ဆိုင်ရာအယူအဆသည်အမှန်တကယ်လိင်ထက်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလာသည်။ လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ထွက်ခွာသွားကြပြီးကျွန်ုပ်နှင့်သူတို့ဘယ်သောအခါမျှမခက်ခဲခဲ့ပါ။ အရမ်းရှက်စရာကောင်းတာကလိင်ကိစ္စကိုကြိုးစားလုပ်ဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ငါဒီဘုတ်အဖွဲ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါချက်ချင်း porn ကိုရပ်တန့်နှင့်ယခု2လ "ညစ်ညမ်းအခမဲ့" ပါပြီ။ ငါစအလုပ်လုပ်ပြီလို့ထင်တယ် ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အထောက်အကူပြုသောရည်းစားရှိပြီးသူမသည်ကျွန်ုပ်ကို h- အလုပ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်ချန်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ငါကြိုးစားရုန်းကန်နေရတုန်းပဲ၊ ငါနင်အနားယူဖို့အတွက်အချိန်ကကြာမြင့်ခဲ့ပေမယ့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်။
ငါဒီရိုက်နှက်ဖို့ငါ့လမ်းပေါ်မှာထင်ပါတယ်။ ငါမျှဝေမယ်ထင်ခဲ့တယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကပြန်ပြောပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်အတော်အတန်အလုပ်များနေပြီးကျွန်ုပ်လုပ်သင့်သောအရာများအားလုံးကိုရေးရန်အချိန်မရှိပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
ငါ uni ရက်ပေါင်းငါ၏အကျောင်းမှနေ့တှငျအမြိုးသမီးမြားနှငျ့အကံကောင်းဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပင်ငါ၏အအစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်၌တည်၏။ ကြှနျတေျာ့ဘဝတစျခုလုံးကာလအတွင်းကျွန်မယောက်ျားတွေကဝိုင်းနှင့်အမျိုးသမီးတွေ့ဆုံရန်အနည်းငယ်သာအခွင့်အလမ်းများကိုခဲ့ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့အစောပိုင်း 20s အတွက်ရက်စွဲများအတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ငါမိန်းမနှင့်ရှိခဲ့ပါတယ်အလွန်အနည်းငယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုနှင့်အတူအလွန်အောင်မြင်သောဘယ်တော့မှကြီးနဲ့ကျွန်မအမြိုးသမီးမြားရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ယုံကြည်မှုနှင့်နားလည်မှုမရှိသောကွောငျ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါပြည်ပမှာအခါငါ့ထံသို့အပေါ်သူ့ကိုယ်သူအတင်းအကျပ်သူတစ်ဦးကိုပြည်တန်ဆာမှ 25 အခါငါသည်ငါ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါသည်ဤအလွန်ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ငါအရမ်းသာ5မိနစ်များအတွက်သူမ၏ shagging ပြီးနောက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ED ခံစားရသည်။ ပြန်ကြည့်, ငါကဒီ ED PMO ငါ၏နာတာရှည် yrs ကြောင့်ခဲ့ကြောင်းယခုနားလည်.
ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိမ့်အမြင့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်အလုပ်၌စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ပူသောအမျိုးသမီးများသည်ငါ့ကိုမကြိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုနှစ်အသက် ၃၀ ရောက်သည်။ o (အရာများလွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကအပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်တစ်ညအိပ်ရာပေါ်၌ဖိတ်ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောသောအခါတွင်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူမကိုသူမသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ သို့သော်ထိုညမှစပြီးညတိုင်းဖုန်းပြောတိုင်းသူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်လိင်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းတွင်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာစကားစမြည်ပြောဆိုမှုများမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၊ သူမကကျွန်မနှင့်အတူအချို့သောချိုသောလိင်ဆက်ဆံဖို့လာမည့်အပတ်ကငါ့အိမ်သို့လာလိမ့်မယ်။
ဒါကအရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါငယ်ငယ်တုန်းကသူမညတိုင်းသူမကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလှဲချဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တာကြောင့်ပဲ။ အခုတော့ငါနေတဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကပင်သူမ၏ shag နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။ ဒီဖိုရမ်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ PMO ဆိုတာတကယ်တော့ ****** ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုတက်စေတာပါ။ ငါသည်လည်းဤဖိုရမ်မှအကြံဥာဏ်များယူပြီး4ပတ်ကြာ PMO'ed မထားပါ။
ငါနံနက်စိုက်ထူရပေမယ့်ငါသူမကို shagged လျှင်ငါတစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဘို့အဒါဟာအလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်ကြောင်းတွေ့ပြီ ငါသူမကိုအရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့်ငါသူမကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်ဖို့သေချာစေချင်တယ်။ နောက်လာမယ့်အပတ်မှာသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ PMO မရှိ ၅ ပတ်ရှိလိမ့်မယ်။ ပါးစပ်ဖြင့်သာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုသာသူမကျေနပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါကပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပြောလိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသူမမိန်းမတွေကိုမဟုတ်လို့မဟုတ်ဘဲငါဟာသူမကိုရှက်ဖို့မျှော်လင့်တာကိုသူမကြောက်မိမှာ၊ သူမကိုငါ့ကိုစွန့်ပစ် အခုအချိန်မှာငါခံစားရတယ်5ပတ်နှင့် PMO မျှငါ့အပြစ်များမှပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အချိန်အလုံအလောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုခံစားရတယ်။ PMO ကိုရှစ်ပတ်၊ ၁၂ ပတ်၊ ၁၂ လတောင်မှ ၁၂ လတောင်မှမထွက်နိုင်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျန်တဲ့တစ်သက်လုံး PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ငါရည်ရွယ်တယ်။
မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေငါမပြုမီဤစကားကိုကြားကြပြီမဟုတ်မယုံနိုင်သလား။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်မ 51 နှစ်အရွယ်လက်ထပ်ကောင်လေးဖြစ်၏။ အစဉ်မပြတ်ငါ porn သူငယ်ချင်းတွေထက်ပိုပြီးပြီးတော့ mags ကနေငါကအင်တာနက်လျှောက်ရှိပြီးတော့သူကတစ်ဦးပင်ပိုကောင်းသညျကောငျးကငျခဲ့သညျ လာ. သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, ကောင်းကင်ဘုံထင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးမားသောခြေလှမ်းသွားငါ၏အနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းကစဖူးပျော်မွေ့ပုံရှိသည်ဟု !!
ငါကစိုက်ထူနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာဘယ်တော့မှဖြစ်သကဲ့သို့ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အခါအစဉ်မပြတ်ငါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခု ED ပြဿနာခဲ့ကြသိကြပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကငါ့ကိုချကြကုန်အံ့နှင့်အခြားကြိမ်ချောလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုယ့်ခဲ့ရပြီးဒါငါအမြဲ porn မှဖွင့်မယ်လို့လိင် drive ကိုရှိခဲ့တယ်ခဲလျက်ရှိသည်။
ထိုအခါငါ၏အ ED ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူအများကြီးပိုဆိုးရဖို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်နေဆဲ porn နှင့်အတူ OK ကို။
ထို့နောက်တစ်ဦးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝတစ်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ငါ porn သို့နေဆဲလည်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အညစ်ညမ်းပေါင်း camming ကြည့်နေစဉ်5သို့မဟုတ်6နာရီတခါတရံ Edge လိုတဲ့ Viagra ရောက်လာတယ်။
ငါ porn ကိုကြည့်, ငါ၏လိင်စိတ်လျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းလာပြီခံခဲ့ရသည်နဲ့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မသွားရနှင့်ညစ်ညမ်းငါ့ကို horny အောင်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ရဖို့ရှိခြင်းခံခဲ့ရရှိသည်ဖို့စတင်နေစဉ်ပြီးနောက်အချိန်ကာလကြာရှည်စွာအဘို့အလွန်မကြာခဏ edging ခဲ့ပါတယ်နှင့်အတူစတင်။
ငါဆရာဝန်များနှင့်ဆီးရောဂါပါရဂူများအတွက်ဖြစ်နှင့်မျှမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါပင် hypnotherapist ခဲ့ဖူးသော်လည်းပြောင်းလဲမှုမရှိ။ ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသတိပြုမိခဲ့ပြီးအချည်းနှီးကြည့်ရှုရန်သာအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်သည်လစုံတွဲတစ်တွဲကာလအတွင်းလုံးဝ libido လုံးဝမရှိခဲ့သည့်အတွက် P & M သည်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လိင်စိတ်နိုးထစဉ်တွင်လိင်စိတ်နည်းနေခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်ပြန်လည်တွေ့ရှိရပြီးနောက်လိင်စိတ်ပြန်ကောင်းလာသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လောက်ကဒီအကြောင်းကိုအများကြီးဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ငါလနဲ့ချီပြီးလိင်စိတ်နည်းတာ၊ ဘာလက္ခဏာမှမရှိဘဲ P & M မရှိဘူး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကပြန်လည်လည်ပတ်နေတယ်၊ ငါပြီးသားပြောသကဲ့သို့ငါထို့နောက်တစ်ပါတ်အဘို့အဖြောင့်နောက်ကျောကိုပြန်ရပြီးတော့ libido နောက်တဖန်သွားသည်။ အခုအခြေအနေကအခုချိန်မှာကျွန်တော့်ဇနီးပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။
ငါအခုအချိန်မှာ“ no libido” အဆင့်ကိုဖြတ်သန်းနေတယ်၊ ​​ဒီတော့ P&M မပါပဲသွားရတာအရမ်းလွယ်ပေမဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လာရင်အရမ်းခက်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ထိုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဆင်ပြေမည်လား၊ ဒီဟာကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ငါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးလူပဲ
ဘ ၀ ၏မြစ်နှင့်ပြည်၏အဆီ ...
ဟေ့ငါ့နာမည် TheTimeIsNight! အခုအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ။ ED မှာတော်တော်များများရှိတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ် (ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း) မှတစ်ခုခုကို fap လုပ်တယ်။ ။ ငါနောက်ကျောအနည်းငယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပေးပါ။
ငါ (၇) နှစ် (၈) နှစ်အရွယ်လောက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစတင်ခဲ့တယ်။ (ငါဘယ်လောက်အထိအသက်မပျော်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမသိဘူး!), ငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာစပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ အတော်လေးအမာခံရန်! သာမန်လိင်ကိုငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ၊ စိတ်မ ၀ င်စားတဲ့ပုံရပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ငါ orgasm သို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ porn အကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန်ဘဝ၌ဤညစ်ညမ်းသောမြင်ကွင်းများကို "ထပ်ခါထပ်ခါ" ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သူတို့ကစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခဲ့ကြသည်! နာကျင်မှုစသဖြင့်သူတို့ဘယ်တော့မှသူတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သော“ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း” ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ သို့သော်အံ့သြလောက်အောင်ပင်ထိုအချိန်၌ကျွန်ုပ်မွေ့လျော်ခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးကြည့်မည်။
ဒါ့အပြင်ဒီသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မယ်, ကျွန်တော်လိင်တူချစ်သူပါ။ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်ခံဖို့တော်တော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်။ “ သာမန်” ကလေးများသည်လက်တွေ့ဘ ၀ ၌သူတို့၏လိင်မှုကိစ္စကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမပြုတော့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်သို့စူးစမ်းလေ့လာရင်း၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းနိုင်သောသမိုင်းကြောင်း (စိတ်မကောင်းပါ၊ မိခင်!) ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒီမှာ fapping ကိုရပ်တန့်ချင်တဲ့ porn အကြောင်းတွေကိုမကြည့်ချင်တော့တာ။
ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကို reboot လုပ်ရန်နှင့် ED ကိုကုသရန်ကြိုးစားပါ။
ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်! (ကျွန်ုပ်၏ 'အိပ်ခန်းကိစ္စများ' သည်ယောက်ျားများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်ဟုကျွန်ုပ်တကယ်ခံစားရသည်)
ငါတစ်ပါတ်အဘို့ရပ်ပြီး, ဒါပေမယ့်ထို့နောက် fapping အားဖြင့်ဖျက်ဆီး! ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့ငါလမ်းတစ်လျှောက်လုံးသွားရတော့မယ်။ ငါအထူးသဖြင့်ရက်အတိအကျကိုအာရုံမစိုက်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအကြမ်းအားဖြင့် ၁၂၀ လောက်လုပ်ချင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ အစဉ်အမြဲ fapping ရပ်တန့်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပြု၍“ မင်္ဂလာပါ”! မေးခွန်းများမေးပါ။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်လွဲချော်သည်ဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးတွေ့မိခဲ့သည့်နောက်ဆုံးညမှာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။
fellas ဘာလဲ! ဒီမှာယောက်ျားလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်နာလန်ထူလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာပရိုဖိုင်းကိုထောက်ပံ့မှုအချို့ရရှိမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် (ဒါကတစ်ခါတစ်ရံမှာအထီးကျန်တဲ့ခရီးလို့ထင်ရမယ်လို့ထင်တယ်) ပြီးတော့ခြေရာခံနိုင်ဖို့ဂျာနယ်တစ်စောင်စခဲ့တယ်။ ငါ့တိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုအကျဉ်းချုံးပြန်ပြောပြခြင်း - ၂၁ နှစ်၊ ကျွန်ုပ် ၁၄ နှစ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော့်မိသားစုကအ ၀ န်းအ ၀ န်းမှမရှိတော့ဘဲငါထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူး၊ မမြင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ အလျင်အမြန်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရင်းညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေမိတယ်။ ဒီနွေရာသီအထိလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ် (အနည်းဆုံးတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်) ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရည်းစားနဲ့ပြaနာကိုပထမဆုံးသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ကွန်ဒုံးကို ၀ တ်ဆင်ရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက်ယင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အချိန်ရောက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်လုံးဝအားလျော့သွားခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့မခွဲခွာခင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တာမို့လိင်ကိစ္စမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ငါအိပ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်အခြားယောက်ျားလေးများနှင့်အတူလှည့်ဖြားခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ဖို့ခက်ခဲနေဖို့နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်အမြဲတမ်းအောက်ခြေအခန်းကဏ္takeကိုယူခဲ့ရတယ်, ဒါပေမယ့်ငါလိင်စဉ်အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို jacking အားဖြင့်ပယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။
ဒီနွေရာသီမှာဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးကိုငါစတွေ့တဲ့အချိန်မှာရိုးရှင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ထက်ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ပြproblemနာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ သူဘယ်လောက်မြန်မြန်နဲ့စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲစွဲမှတ်သွားတယ်။ သူဟာကျွန်တော့်ကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူဟာဖွင့်လှစ်ထားပြီးကောင်းတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားနေတယ်။ ငါနှင့်ငါရှိနေဆဲဖြစ်သကဲ့သို့သူ့ကိုဆွဲငင်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုဆွဲဆောင်, ငါခက်ခဲခက်ခဲပင်, ပင်တစ် ဦး တည်းနေရခက်ပင်ရတဲ့အချိန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသူရူးနဲ့တူအောင်လှည့်စားခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်သတိရမိတယ်။ သူဟာလုံးဝနားလည်မှုရှိခဲ့တယ်။
လိင်မှုကိစ္စသည်သူနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအချိန်အများစုရရန်အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီးပြင်းထန်စွာနှေးကွေးစွာသုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းခံရသည်။ သူသည်တစ်ချိန်ကသူသိခဲ့သောကြောင့်သူသည်အချိန်ကုန်ခံပြီးထိန်းထားရန်နှင့်အပြာရောင်ဘောလုံးများကိုပေးရလိမ့်မည်။ သူ cummed သူသေပြီနှင့် cuddle ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုချွတ်ရမှတက်မခံစားရလိမ့်မယ်) ။ ကျွန်ုပ်၏အမှန်တကယ်လိင်အတွေ့အကြုံများကို virtual porn / masturbation အလေ့အထနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် (ယခု၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အသည်းအသန်ရယူနေရသနည်း၊ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခက်ခဲမရနိုင်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောပျက်ကွက်တူခံစားသတိရပါ။ အထီးကျန်နှင့်မလုံလောက်။ အဲဒီနောက်မှာငါ ED နဲ့ကုသမှုတွေကိုစလေ့လာခဲ့တယ်။ ဒါကနောက်ဆုံးမှာငါ့ကို YBOP နဲ့ဒီဖိုရမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။
ဒီတော့တိုးတက်မှု၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်မှ စ၍ ငါယောက်ျားလေးကိုတွေ့ပြီးသူနှင့်အတူလှည့်စားနေသည့်အချိန်တစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမျှမကြည့်ခဲ့ပါ။ ဒီနွေရာသီမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုငါမမှတ်မိဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယသို့ခုန်ငါ့အဘို့မှားပြောင်းရွှေ့ကြေးထင်ပါတယ်။ ငါကဒါကိုနည်းနည်းလေးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်ကပဲငါဟာတက်ကြွပြီးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာထက်ပြproblemနာကိုဖုံးအုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ဘဲရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ကိုကျင့်ရန်မစသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ၁၄ ရက်အတွင်း !! ငါမျှော်လင့်ထားတာကိုငါတကယ်မသိဘူး၊ ငါမချိန်းထားသေးဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ငါလအနည်းငယ်ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ဖူးတဲ့အချက်ကငါ့ရဲ့စုစုပေါင်းပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မျှော်လင့်ပါတယ် မနေ့ကငါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသောမနက်ခင်းနှင့်နိုးထလိုက်သည်။ နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမှာကျွန်တော်နိုးလာပြီးစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်နေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ငါအိပ်မက်နှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်အရာကိုမအောက်မေ့ကြဘူး။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်နောက်ဆုံးအချိန်အထက်တန်းကျောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကို?
[သမိုင်း] 30 နှစ်ပေါင်း 20 နှစ်ပေါင်းဟောင်း, မိုးသည်းထန်စွာ PMO; ED နှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ကြုံနေရ softcore နှင့် hardcore မဂ္ဂဇင်းများကို ၉-၁၀ ရက် # 5O #9တွင်အကြီးစား PMO မှစတင်ခဲ့ပြီး ၁၃ နှစ်အရွယ် PMO မှစတင်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာနှိုးဆွမှုအတွက်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုအသုံးပြုသည်၊ သို့သော် ၁၅ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်။ ရည်းစားနှင့်အတူလေးလံသော petting - handjob; စိုက်ထူခြင်းနှင့်အတူပြissuesနာများ, ဒါပေမယ့်ကြုံတွေ့နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (သို့မဟုတ်လုံးဝမှာသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း)
-16 နှစ် - ရှားပါးသောအို -17 နှစ်နှင့်အတူ blowjobs နှင့်အတူနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် - အင်တာနက်ဗီဒီယိုများနှင့်အတူပြင်းထန်သော PMO -18 နှစ်အရွယ်အပျိုစင်ဆုံးရှုံး; ကြိုတင်ပြီးစကားပြောပြီးနောက်ကွန်ဒုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းဆုံးရှုံးခြင်း * (မိန်းကလေးတစ် ဦး တည်းနှင့်သာ) ပြissuesနာများမှာအကြိမ်အနည်းငယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူခြင်းနှင့် O ကိုတိကျသောအနေအထားမှထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
အခုတောင်မှငါကွဲပြားခြားနားသောအနေအထားကနေအိုနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ 18- ပစ္စုပ္ပန်ငါလွန်ခဲ့သော5နှစ်သို့မဟုတ်ဒါနှစ်အတွင်းစုစုပေါင်းမိန်းကလေး 12 ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါစုစုပေါင်းစုစုပေါင်း ၇ နှစ်ခန့်လုံးလုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးအတူတူနေခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ကို 'Sheila' လို့ခေါ်ကြပါစို့။ သူမသည် ED အကြောင်းကိုနားလည်မှုထက်လျော့နည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်မကြာခဏသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင် သူမသည်သူမလုံလောက်သောဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်မယုံဘူး။ ငါနဲ့အခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ထပ်တူပြissuesနာရှိလားလို့သူကတွေးတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေများများရှိခဲ့ဖူးတယ် (ငါတို့တခါတလေထက်ပိုပြီး) ကွဲကွာသွားစေနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ရှီလာကလွဲလို့ငါမမြင်ဖူးတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းဟာတကယ်ကိုမျှတစွာနားလည်မှုရှိကြတယ်။ ငါ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေမရရှိလျှင်ပထမလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်မိပြီးကျွန်ုပ်သည်တောင်းပန်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုသာခံလိုက်ရသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကအဆင်ပြေသည်ဟုဆိုကြသော်လည်း၊ ဆက်ဆံရေးသည်လအနည်းငယ်ထက် ပို၍ ကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါကွန်ဒုံးဘယ်တော့မှမသုံးဘူး၊ ED ဟာပိုဆိုးလာတယ်။ Levitra, Viagra, Cialis စသည့်ဆေးများမပါဘဲကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်)
လိင်မှုကိစ္စတွင်, P ကိုဗီဒီယိုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ကာမျက်လုံးများကိုပိတ်ပြီးအိုကိုသာကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးစဉ်းစားချက်မှာ“ ငါဘာမှမခံစားရဘူး” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါငါ့စိုက်ထူဆုံးရှုံး။ ရှီလာကကျွန်တော့်ကို blowjob ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့စိုက်ထူမှုကိုပြန်ရရှိမယ်၊ ပြီးတော့ငါထပ်မရှုံးခင်မှာမြန်မြန်လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားမယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာအိုသို့ဘယ်တော့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ညည်းညူခဲ့တယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လကအခြေအနေကိုကောင်းစွာနားလည်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး (သူမ၏ကိုဂျင်လို့ခေါ်ကြစို့) နဲ့စချိန်းတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တိုင်း Levitra ကိုသုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးနေတုန်းပဲ။
ကျနော်တို့စက်တင်ဘာလမှတစ်ဆင့်လိင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ခဲ့ရပြီးသူကငါ့ကိုတစ်ဦးလက်မောင်းကုန်ကျခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးခြေထောက်အပတ်တိုင်းဆေးပြားလာပြီ။ ငါအီတလီလေ့လာမှုပထမဦးဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်အခါ, အစောပိုင်းအောက်တိုဘာလအတွက် YBOP ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ချက်ခြင်း P နှင့်အမ် Jen ရပ်တန့်နဲ့ကျွန်မတကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်အကြောင်းကို (ဆေးပြားကိုသုံးပြီး) အိုမှလိင်ဆက်ဆံရန်ဆက်ပြောသည်။ ငါသည်ငါ့အာရုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အစား P ကို ​​flashbacks အပေါ်မှီခို၏ယခုအချိန်တွင်နေရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ငါကတကယ်အလုပ်လုပ်စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန် ၄၅ မိနစ် ၁ နာရီနှင့်ဆန့်ကျင်လျှင်မိနစ် ၂၀ အတွင်းအိုသို့ရောက်နိုင်သည်။ ငါပိုပြီးအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်ပိုပြီးသတိထားမိခံစားရတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာတော့အရာရာတိုင်းကိုမငြိတွယ်စွာမနေခဲ့မိဘူး။ ED နဲ့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် Thanksgiving နောက်တစ်နေ့မှာ Jen နဲ့ကျွန်မပြတ်သွားတယ်။ ထိုအခါငါဒီဇင်ဘာလ 20 ရက်နေ့တနင်္ဂနွေညအထိကြာရှည်တစ်ပါတ်တစ် PMO မူးရူးသွား၏။ ငါ reboot ပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
တစ်ပတ်လုံးလုံး softcore တစ်ခုတည်းသော static nudity ပုံအချို့ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုပြန်လည်သက်သက်ဟုမှတ်ယူဆဲဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တနင်္လာနေ့ကိုတရားဝင်နေ့လည် ၁ နေ့ခေါ်ဆိုတယ်။ ငါအပြားချပ်ချပ်ထဲမှာရှိနေပြီးသား။ libido မရှိဘူး။ အောက်ထပ်ကအေးပြီးအသက်မဲ့တယ်။ ငါပုံမှန်ထက်ပိုပြီးက poking နှင့် prodding နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နေပါတယ်ပေမယ့်။
ဒီနေ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေရဖို့နည်းနည်းပိုစွမ်းအင်ရတော့မယ်။ အများအားဖြင့်ငါအချိန်ဆွဲနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါပဲယနေ့အမှုကိုပြုရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ ငါသည်လည်းမြူမှထွက်လာကဲ့သို့ဤနိုးထခံစားမှုရှိသည်။ ငါဒီထက်ပိုပြီးလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ အရူးလောက်၊ ငါလည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့စီးကရက်မရှိတဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးတစ်နေ့တာ ဒီတော့ reboot ၏နေ့ 3, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ပထမနေ့။ ငါဒီစွမ်းအင်နဲ့တူတယ်၊ ဒီအသိတရားကငါ့ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်အောင်ထပ်မံတွန်းအားပေးနေတယ်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုသာ ၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြနိုင်သည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အားကောင်းနေသည်။ ငါတကယ်တော့ဒီအတွက် reboot ကိုချီးကျူးချင်တယ်။
ငါသည်ဤဖိုရမ်တွင်အမှတ်မထင်ဝမျးသာ။ ငါစိတ်ပူရန်စတင်ခဲ့ပေမယ့်, ထိုအမှုရှိသမျှပို့စ်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျနော်လူတိုင်းဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါခဏလောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုကြည့်နေတုန်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကမှနှိုးမရခဲ့ ဒါကကျွန်မကိုစိတ်ပူလာတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်မသုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်။ အခုဒီမှာရောက်နေတယ်။
ငါစောစောစီးစီးဖမ်းမိတယ်လို့ထင်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတခြားယောက်ျားတွေလိုမျိုးမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါရောက်နေပြီ။ ရပ်တန့်သွားသောယောက်ျားများ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ကြက်ဆင်ကိုတားရန်ကျွန်ုပ်ကိုမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။
အခု ၅ ရက်ရှိပြီ၊ ငါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားလာရပြီ။ သုညလစ်ဘိုဒါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုကျဆင်းသွားသည်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာထွက်ပေါ်လာတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုစွဲကိုင်ထားတယ်။ ငါ၌စွဲလမ်းမှုရှိသည်ကို သိ၍ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းနေရခြင်းကိုသိရသည်။ ငါရှေ့လာမယ့်အရာတွေကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်
porn အဘယ်သူမျှမဟာသပါ! ငါကဤကဲ့သို့သောအလေးအနက်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်ကိုသိဆန္ဒရှိ .;
ကျွန်တော်ဘယ်လ်ဂျီယံက ၂၁ နှစ်ပါ (ငါရှုပ်ထွေးပြီးအင်္ဂလိပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်မှားယွင်းမှားယွင်းမှုများကိုခွင့်လွှတ်သနည်း) ကျွန်ုပ်၏အစ်မနှင့်အတူမိဘ၏အိမ်တွင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသင်တန်းပြီးဆုံးခါနီးပြီ။ ဒီအလုပ်မှာစလုပ်ဖို့နီးပြီ။
အသက် ၇ နှစ်မှ ၈ နှစ်အထိငယ်ငယ်တုန်းက M ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် (အထူးသဖြင့် ၁၀-၁၂ နှစ်မှစ၍) ထိုအချိန်ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဖူးသမျှကိုမှတ်မိသေးသည်။ ငါတို့မှာအင်တာနက်မရှိဘူး၊ ငါနဲ့တူတာဘာမှမရှိဘူး၊ ငါလုံးဝ porn မရှာဘူး။ ကိုယ့်အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာအင်တာနက်ရတဲ့အခါဒါပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနေရာမှာအကြိမ်အနည်းငယ်ရောက်ဖူးပြီးအဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတချို့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှနေရာငါဓါတ်ပုံတွေကိုရှာဖွေနေခဲ့သည်။
ငါအသက်ကြီးလာပြီးကွန်ပျူတာကိုကျွမ်းကျင်တတ်လာတာနဲ့အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်အတိုများကိုတောင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မိဘနဲ့ညီမလေးစောစောစီးစီးအိပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါနင့်ကိုစောင့်နေခဲ့လို့ဘယ်သူမှငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ကြဘူး။ ငါ softcore porn ကိုကျော်သွားပြီး hardcore ပစ္စည်းများကိုဖြောင့်သွားသည်ထင်သည် (ပုံများသည်ထိုနောက်မှကျွန်ုပ်အတွက်တော့မလုပ်ခဲ့ပါ)
ကိုယ့်အကြောင်းကိုအသက် 16 မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး Laptop ကိုလေမကုန်မှီတိုင်အောင်ဤသည်ပေါ်သယ်ဆောင်။ ဈယခုဈနေ့တိုင်းတနေ့လုံးအကြှနျုပျ၏အမှုကိုပြုနိုင်သည့် ment အခန်းထဲမှာတစ်ဦးလက်ပ်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ porn ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဝင်ပုံကိုသိပိုပြီးအစွန်းရောက် porn စသည်တို့မှဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
အသက်အရွယ် 18 မှာကိုယ့်ရည်းစား (ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး) ရတယ်။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုတစ်နှစ်ကြာမြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစပ်လျဉ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး ED ပြဿနာတွေတက်ပြသဘယ်မှာနှင့်ဤဖြစ်ပါတယ်။ ဈဈအဆ (အချိန်များတွင်ပျက်ကွက်) မှာခက်ခဲအချိန်ကတက်လာပြီခဲ့သတိရပါ။ နှင့်ကွန်ဒုံး (နေဆဲ) ဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာခဲ့ကြသည်, သူတို့က (ငါ့ကိုချက်ချင်းငါ့အသစ်သားကိုဆုံးရှုံးစေက verry ခက်ခဲ O. မှကိုယ့်နေဆဲဈ het နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုတင်5ရက်ပေါင်းမှတက် P ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ပြဿနာများရှိသည်မယ်လို့သတိရလုပ် ဒါကြောင့်ပင်နောက်ကျောထို့နောက်ဈ) ဈကဆို concious အတွေးကိုပေး၏ဘယ်တော့မှပင် Tho, ညစ်ညမ်းသည်ငါနှင့်အတူ messing ခဲ့သည်သိတယ်။
ကျမခွဲခွာချိန်ကစပြီးကတည်းကလိင်မဆက်ဆံဖူးတဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ်ပေါ့။ တစ်ခါကမင်းသုံးယောက်အတွက်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ ငါစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူး။ နောက်တစ်ခါကျတော့ငါတကယ်မူးနေပြီး၊ ငါတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊
အရာပစ္စုပ္ပန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏။ ကိုယ့်ရဲ့ကျရှုံးမှုနှင့် ED (ကျွန်တော့်အသက်အရွယ်မှာ ED မရှိသင့်တဲ့ကောင်လေး) ကိုနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါရည်းစားရဖို့အချိန်ကျပြီ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းအတွက်အဖြေရှာရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဝဘ်ကိုရှာဖွေခြင်း YBOP ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုက်ပေါ်ရှိအကောင့်များကိုဖတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်တူသည်။ ငါဒီပြproblemနာကိုခံစားနေရတာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့အလွန်တရာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်
သငျသညျယောက်ျားတွေပဲ ,, ငါ့အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ !!! ကျွန်မသတ်သေကျူးလွန်ဖို့အကြောင်းခဲ့တယ် !!
ငါ့မှာလှပတဲ့ဆံပင်ရွှေရောင် GF ရှိတယ်။ ရုရှားမှာသူမမိသားစုကိုလာလည်တုန်းကငါတို့သုံးလနေခဲ့တယ်။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှစ်ကြိမ်၊ ၂-၃ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သိတယ် ... အရူးပဲ။ ငါညာဘက်ခြမ်းမှာကြွက်သားတွေဆောက်နေတယ်။ အရမ်းဂရုစိုက်ရလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ အားလပ်ရက်ကနေပြန်လာတာ ပြီးတော့ငါသူမကိုတကယ်ချစ်ဖို့ကြိုးစားချင်တယ်။ အရာရာအဆင်ပြေနေတယ်။ … starter ၈ မိနစ်လိုပဲငါ့ p ဟာ flaccid ကိုစတင်လာခဲ့တယ်။
ငါသူမကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်အောင်ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလိင်တံကထွက်မလာတော့ဘူး။ သူမနဲ့တူတယ်။ အဘယ်သူမျှမငါစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့လိမ့်မယ်ဟုပြောသည်နှင့်ငါ၎င်း၏နီးပါး flaccid သည့်အခါငါ့လိင်တံနှင့်အတူအမြဲ၎င်း၏လာရန်ရလျှင်, (3 ပတ်ကြာ) အခါတိုင်းဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသည်အတိအကျတူညီသောအရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ငါစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ဒီအကြောင်းကလာတာ၊ မလာတာလား၊ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပူ။ ဒေါက်တာ Google ကိုစတင်မေးမြန်းပြီးကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မပိုသောမွှေးကြိုင်သောရူပါရုံ… .bye celina cross … bye bye by Sunny Lane … ps: ကလေးဖတ်ပါ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး .... အနည်းဆုံးတော့ငါ t မကောင်းတဲ့လမ်းကိုမလိမ်ခဲ့ဘူး
ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်လူမှုရေးမသန်စွမ်းမှုကြီးပြင်းလာသည့်လူငယ်တစ်ယောက် (၂၁ နှစ်) ဖြစ်သည်: ရှက်၊ ယုံကြည်မှုမရှိဘူး၊ အနိုင်ကျင့်တယ်စသည်ဖြင့်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းရှိရေချိုးခန်းတွင်ကျွန်ုပ်၏နေ့လည်စာကိုစားခဲ့သည် (ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ ဒါကသင့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်ဖြစ်သည်) ။ နှစ်ပေါင်းများစွာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေဖို့အိပ်မက်တောင်မက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါစိတ်ကူးယဉ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုဟာ ၁၈ နှစ်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာမခံစားရသလိုတခါတရံပျော့ပျောင်းတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မတော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဟဟ။
နောက်တစ်ခါကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်ပူပန်မိသည်။ နောက်တဖန်ထိုမိန်းကလေးကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ဖူးပါ။ ငါထို့နောက်ပို။ ပို။ စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်သူတို့ကိုရဖို့ sketchy နေရာများတွင်တက်အကွေ့အကောက်များသော, craigslist အပေါ် ED ဆေးပြားကိုရှာဖွေစတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါတောင်ခေါ်ခဲ့ရင်တောင်မှငါဟာမိန်းကလေးနဲ့အတူနေခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါခက်ခက်ခဲခဲရနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကကျွန်တော့်ကိုသတ်တာပဲ။ လိင်မှုကိစ္စမရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရှိရင်ငါအချိန်ဖြုန်းနေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လူငယ်များအကြားတွင်အလွန်အမင်းရှားပါးသော zona ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အရေပြားပေါ်ရှိအဖုအပိမ့်များနှင့် psoriasis ans ။
ငါကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလှည့်စားခဲ့မိသည် - ငါဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်း (လုံခြုံမှုမရှိသေးသော) လူငယ်တစ် ဦး အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကြက်များသည်ငါ့ကိုကြည့်နေခဲ့ကြသော်လည်းပြန်လှည့်မကြည့်နိုင်ခဲ့။ လိင်မှုကိစ္စမလုပ်ခင်ကအခြေအနေကအခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်။ လိင်မှုကိစ္စမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ နို့စို့တယ် ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး၊ (ငါသူငယ်ချင်းတ ဦး အားကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအမှားအယွင်းများအကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်၏အခြားသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုပြောကြားခဲ့ရာမည်သူ့ကိုမျှထပ်မံပြောကြားရန်ကျွန်ုပ်မဆုံးဖြတ်တော့ပါ။ )
YBOP ကိုမတော်တဆကျမိတဲ့အခါငါမျှော်လင့်ချက်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ရယ်စရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် (ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူခြင်းမရှိ၊ တော်တော်လေးဖျားနာခြင်းအမျိုးအစား) ၌ကျွန်ုပ်၏အခြား tabs များကိုအမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအခါ၊ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုမည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ် EUREKA! ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ED ၏အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရှာဖွေခဲ့သည့်ရာပေါင်းများစွာသောအင်တာနက်ရှာဖွေမှုများထဲမှဤသည်မှာကျွန်ုပ်အားအမှန်တကယ်အဖြေပေးခဲ့သည်။ အနားယူရန်၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောသဘောတူညီမှုကိုမပြုလုပ်ရန်သာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် PM ကိုယခု ၄ လခွဲခန့်အခမဲ့ရရှိသော်လည်းထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည် (ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးပတ်ကပြိုကွဲခဲ့ပေမယ့်ရံဖန်ရံခါချိတ် -up) ။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀%၊ ၇၀ ခန့်အထိကျွန်ုပ်မရောက်နိုင်သေးပါ၊ ကွန်ဒုံးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မချရသေးသောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်ကိုဖြတ်ပြီးမည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုကြည့်တော့မည်။
ငါအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ။ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကတည်းကစကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. အများအပြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခဲ့ဖူးပေမယ့်အမြဲနေသမျှကာလပတ်လုံးငါမှတ်မိနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြဿနာများရှိခဲ့ပါပြီ။
ငါ porn စွဲလမ်းခဲ့သလား ဖြစ်နိုင်စရာ။ ငါတကယ်မသေချာဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်အတွင်းတစ်ပတ်ကိုပျမ်းမျှ ၅ ကြိမ်ကြည့်ဖူးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ နှစ်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတွေကိုစကြည့်တော့တယ်။
နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်သည်လှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေရန်မရေမတွက်နိုင်သောဗွီဒီယိုများကိုလှန်လှောကြည့်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ချိန်တည်းတွင်ဗီဒီယို ၄ ခုမှ ၅ ခုကြည့်ရှုခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ယင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့မလွယ်ကူခဲ့ ငါအခြေအနေ၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သောသဘောပေါက်ပေမယ့်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ။ porn သည်အမှန်တကယ်လူတစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေပြaနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤအရာအလုံးစုံရေးသားချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ တစ်ကိုယ်တော်တစ်ရက်လျှင်ငါးကြိမ်မှခုနစ်ရက်အထိတစ်ကိုယ်ရေညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းလေးနက်သောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ထိုမိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ငါကများသောအားဖြင့်ချိုချိုသာသာနဲ့ထလာတဲ့ပြproblemsနာတွေတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲ။
သူမသည်ငါနှင့်အတူခဲ့ဒုတိယမိန်းကလေးများဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီဆက်ဆံရေးကနေ၊ ငါဟာလိင် မှလွဲ၍ ငါ့အတွက်ဘာမှမရည်ရွယ်ဘဲမိန်းကလေးငယ်များ၊ မိန်းကလေးအမျိုးမျိုးနှင့်လိင်အကန့်အသတ်များရှိနေသည်။ စိုက်ထူနေတဲ့ပြproblemsနာတွေကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာပါပဲ။ ငါကွန်ဒုံးကိုဝတ်လေ့မရှိဘူး၊ ငါဝတ်တာကိုစပြီးတခါ၊ အဲဒီမှာသိပ်မကြာခင်မှာပဲငါ့စိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်။
ငါကွန်ဒုံးအနည်းငယ်အချိန်မသုံး၏မိုက်မဲသောအမှား လုပ်. , ကံကောင်းတာ, ငါဆိုရောဂါများဖမ်းမိဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာထိုအခြေအနေများတွင်, ကွန်ဒုံးမပါဘဲ, ငါသည်ငါ့စိုက်ထူထားရန်နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်…ယခုနှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ထည်ကိုကွန်ဒုံးမပါဘဲဆက်လက်မထိန်းသိမ်းနိူင်တော့ပါ။ မိန်းကလေး၏ယောနိသည်အမှတ်အသားနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်သောအကျင့်နှင့်တူသည်။ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်မပြုလုပ်ပုံမပေါ်သောကြောင့်၎င်းသည် porn နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
သို့သော်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခုလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသော၊ ကာယရေးအပျော်အပါးဖြစ်လာသည်ဟူသောအချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၎င်းသည်“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ဖူးသော်လည်းယခုမူကျွန်ုပ်သည်တစ်ချိန်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်“ နှလုံးကြေကွဲခြင်း” ခံခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လုံးဝပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ ငါထင်တာကငါ့ရဲ့ဂျွန်ဆင်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ / ရိုးသားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ" ၏ဒြပ်စင်ကိုလူများ၏ခံစားချက်ကိုကြည့်ရှုရန်ညီမျှခြင်းသို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကတိကိုငါစမ်းကြည့်နေတယ်။ ငါအခု ၂ ရက်နေပြီ အခုထိငါအိပ်မောကျနေတဲ့အိပ်မက်တွေနဲ့နံနက်စောစောသစ်သားတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီတစ်ခုလုံးကို reboot လုပ်လို့မရဘူး။ သင်တို့ကိုငါလူယောက်ျားတင်ထားစောင့်ရှောက်မည်။
ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်ပြီ အသက် ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာဒီနေရာမှာများစွာသောအခြားသူတွေဟာငါ porn နဲ့ masturbation ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် porn ကိုအတိအကျဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်အရမ်းကိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါ၏အလေ့အကျင့်၏အစအ ဦး ၌ငါ့ကိုချွတ်ရရန်အရာများစွာကိုမလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ငါအတွင်းခံမော်ဒယ်များ, ပူပြင်းတဲ့သားများနှင့်အတူဂီတကလစ်များနှင့်တကယ်တော့တစ် ဦး ကိစ္စအတွက်အဖြစ်, lol အတွက်ထိတွေ့သို့မဟုတ်မြည်းသို့မဟုတ် tits ၏တစေ့တစောင်းခဲ့တစုံတခုမှထွက်လူရှုပ်လိမ့်မည်။
အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ဟာ broadband connection နဲ့ private အခန်းတစ်ခန်းရလာတာနဲ့အမျှငါ porn ကိုသီးသန့်ထားလိုက်တယ်။ ဒီပစ္စည်းကပိုပိုပြီးဂရပ်ဖစ်တိုးတက်လာပေမယ့်ငါဟာအစွန်းရောက်အမျိုးအစားတွေကိုမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး (သူတို့ထဲကအများစုဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ပဲ) ။ ငါသို့သော်ထပ်ခါထပ်ခါမြင်ကွင်းများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်အသစ်သောအချိန်ကိုအသစ်တွေ့ကြုံခံစားနှင့်တစ် ဦး ထက်ပိုအားကောင်းတဲ့အော်ဂဇင်ရှိသည်။ ငါကနေ့စဉ် 2-3 ကြိမ်စာရင်းမှာပျမ်းမျှ alot ထိုသို့ပြုလေ့ရှိတယ်။
ငါအသက် ၁၈ နှစ်မှာပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကြုံခဲ့ရတဲ့အခါမိန်းကလေးကိုသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့်အိပ်ခန်းထဲကိုအရာရာရောက်သွားတဲ့အခါဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ငါဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ပါစေငါဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ရှက်ရွံ့မှုတွေကြောင့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အချိန်ကငါ့ကိုထွက်ပြေးစေခြင်းနှင့်ငါအရာအားလုံးအလုပ်လုပ်နေလျှင်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ငါ့အကြိုက်ဆုံး porn ကြယ်များထဲမှတစ် ဦး vid streaming အိမ်သို့ဖြောင့်သွား။ သတိရပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စိုးရိမ်တာကိုပဲစိတ်ထဲလျှော့ ထား၍ ရလို့ သို့သော်လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောကြိုးစားမှုများရှိခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးကိုအမှန်တကယ်ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အဆုံးတွင်သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ၊ သူမနှင့်ပြိုကွဲခဲ့သည်။ သူမသည်သူမအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများအတွက်သူမကိုအပြစ်တင်မိသောကြောင့်ငါဂရုမစိုက်ပါ။
ဆက်ဆံရေးထဲကငါနောက်ဆုံးတော့အတူတူပင်တကယ်လိုက်တယ် fetishes မှမြင့်တက်သောငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်။ အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နှင့်အထူးသဖြင့်မြည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အစဉ်အမြဲနှစ်သက်မိသည်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီသန္ဓေသားလောင်းကငါ့ကိုအားပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့မြည်းကိုးကွယ်မှုကိုပိုပိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ပျော့ပျောင်းသောအမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကနောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါကြည့်ခဲ့တဲ့အထူးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပဲ။ ကျွန်မရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မareaရိယာကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြှောင်တွေရှာတော့တာပေါ့။ ၀ မ်းသာစွာဖြင့်ဤအတားအဆီးသည်ကျွန်ုပ်အားကျပန်းလူတစ် ဦး မှကျွန်ုပ်အားထိုလမ်းပေါ်သို့မသွားရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ငါ့ကိုအရှက်ခွဲမသွားစေနိုင်ပါ။
ကျွန်တော့်နောက်ရည်းစားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထပ်တူပြproblemsနာတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်။ ငါပထမလအတွက်သူမကိုမထိုးဖောက်နိုင်ပေမယ့်ကံကောင်းတာကသူမကမိန်းကလေးကိုတကယ်ချစ်ပြီးချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါကောင်မလေးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ ED ကိုကုသဖို့နည်းလမ်းတွေစတင်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ YBOP ကိုရှာတော့အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာ။ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကြာတွင်ပြန်လည်ပေါင်းသင်းခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံး၌အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရရှိခဲ့ပြီးအသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်တွင်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့သော်လိင်သည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်၏ဒစ်သည်အလွန်ပြင်းထန်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအလွန်အမင်းစွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လုံးဝဘာမှမခံစားရနိုင်ဘူး ငါမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာအားလျော့သွားပါလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်ငါချိုပြီးတစ်နာရီခန့်အဘို့အဘို့အ fucked ရင်တောင်ကိုယ့်အထွတ်အထိပ်နီးကပ်လာဘယ်တော့မှ။ BJ နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားလုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါ။ ငါ samo အာရုံခံစားမှုရှိခဲ့သည့်အကြိမ်အနည်းငယ်သူမအဆုံးမှာအနာရလာသောအခါ။ အဲဒီအချိန်မှာသူမနာကျင်လာတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ရပ်လိုက်ရတယ်။
ဒါဟာအားလုံးလိင်နှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ပြဿနာနှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါ့ဦးခေါင်းသည်စောင့်ရှောက်ဖို့တကယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းအပြုသဘောရလာဒ်များမြင်ဘူးသော်လည်း porn မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ရောက်သွားတယ်။ တစ်မူးရူးနောက်မှငါအမြဲပင်အပြာဆေးလုံးကို fix မဟုတ်နိုင်ကြောင်းကိုအနည်းဆုံးတစ်ပါတ်မှုအတွက်ပြဿနာများ Ed ခဲ့သည်။ ခဏပြီးနောက်ဒီလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သူ့အဘို့မယ့်လွန်းတယ်, သူသည်ငါနှင့်အတူတက် broked ။ ငါပျက်စီးပေမယ့်တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့ဤမိုက်မဲ shit ဖယ်ရှားပစ်ရရန်၎င်း၏နောက်ဆုံးအချိန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဤဖိုရမ်မှအခြားသူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်အတူတူပင်ပြproblemနာဖြစ်သည် - ED သည် PMO စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။ ကျွန်တော့်ကိုဒီခေါင်းစဉ်နဲ့သုတေသနပြုစေတာက၊ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်လှပသောအသက် ၃၀ အရွယ်ရှိမိန်းကလေး (ကျွန်ုပ်အသက် ၅၂ နှစ်) နှင့်လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရှိပြီး၎င်းသည်မထနိုင်ခဲ့ဟုပြောရန်အသုံးမကျသောအချက်ဖြစ်သည်။။ ငါ ၁၁ / ၁၂ အရွယ်ကတည်းကမဂ္ဂဇင်း၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အင်တာနက်တို့ကဲ့သို့အစတွင်အစတွင်ကျွန်ုပ်သည် PMO ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားသူများစွာကစိတ်လှုပ်ရှားရန်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသော P အမျိုးအစားကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်၊ ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူး
ငါအိမ်ထောင်ပြုပြီးနှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမိပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သူမအလွန်ကြီးမားလာပြီးအခြားအရာများကြောင့်သူမအတွက်စွဲမက်စရာမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ငါ့ကို PMO ဖြစ်လာသည်။ ယခုရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ယခုပြofနာ၏ကောင်းသောအပိုင်းအစမှာ P ကိုစွဲလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါကလှပသောအသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ED (တစ်ကြိမ်ထက်မက) မည်သို့ရှင်းပြနိုင်မည်နည်း။ ဒါကြောင့်ငါ rewiring လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးပမ်းမှု 30 ရက်အကြာမှာကျဆင်းသွားတယ်, ဒါကြောင့်ယခုငါ4နေ့ပြန်သွားပါ။
ငါ P stash အားလုံးကိုဖျက်ပြီးပြီ။ ငါ 99% ရရှိသော Usenet အကောင့်ကိုဖျက်လိုက်ပြီ။ ပို့စ်များကိုပိုမိုဖတ်လေလေပြtheနာသည် PMO ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်နောက်ကျသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်နောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ၊ လိင်မှုကိစ္စပြောဆိုခြင်းသာမကသင်၏ဘဝကိုမဖျက်ဆီးမီထွက်ရှိသောထိုလူငယ်များအား PMO ကိုရပ်တန့်ပါ။ အစီအစဉ်ကိုမည်သို့ကပ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များကိုကြိုဆိုပါသည်။
ငါ ED ခံစားနေရပြီးငါနဲ့ကျွန်မပုံစံလုပ်ရန် Porn စောင့်ကြည့်ရန်၎င်း၏ဆင်းကိုငါသိ၏။ ငါပင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသာအကြောင်းကို2စက္ကန်ကြာရှိရာအမှတ်မှာယခုဖြစ်ကြောင်းကို, တစ်ရက် porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် 3-20 ကြိမ် masturbating နေပါတယ်။ ငါသည်လည်းသင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ start ကပြောပါတယ်သူကောင်လေးနှင့်အတူငါ 12-13yr ဟောင်းဖြောင့်ကိုစောင့်ကြည့်အဖြစ်ပယ်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်လိင်တူချစ်သူလိင်, ဒါပေမယ့်မကြာခင် orgy, bukkake နှင့်ယခု shemale ပါဝင်သည်ပေးသောညစ်ညမ်း၏အခြားအမျိုးအစားများပေါ်သို့ရွှေ့ဖို့ခဲ့ရပြီးရံဖန်ရံခါသဘောတူ လိင်တူချစ်သူ porn ။
ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်အလွန်ဆင်းရဲသောလိင်မှုဘ ၀ ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူမ၌လိင်ဆိုင်ရာတွန်းအားမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားသူများနည်းတူထိုနေ့တွင်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစဉ်းစားသောအခါမှသာလျှင်ငါတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ငါ့အတွက်ဒီနေ့ဟာ porn 1၊ ငါ့ကိုကံကောင်းပါစေ!
ထောက်ခံမှုအတွက်ဂျာနယ်တစ်ခုစတင်ပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရန်။ ဘာသာရပ်အကြောင်းစဉ်း စား၍ ဤမည်သို့စတင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ လူအုပ်နောက်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်ုပ်ပြောပြလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးငါမကြာသေးမီကအသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအချိန်အတော်ကြာရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ၉ နှစ်ခန့်တွင်အင်တာနက် porn ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ shit အဖြစ်ငယ်ရွယ်, ငါသိ၏။ ငါအသက် ၁၄ နှစ်မပြည့်သေးခင်အထိငါသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများသို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲတကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူငါနေစဉ်ငါ့စိုက်ထူစွမ်းရည်တဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူ၎င်းသည်ပြီးဆုံးရန်ပိုမိုကြာမြင့်သည်၊ ဗီဒီယိုများများစွာပြတ်တောက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ပုံနှင့်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်များကိုငြီးငွေ့ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များဖြင့်မကြာခဏအရှုံးပေးရသည်။ အခုတော့ငါစိုက်ထူမှုရနိုင်, ဒါပေမယ့်ငါက porn ကနေအရမ်းငြီးငွေ့ဖြစ်လာတယ်သောအစစ်အမှန်မိန်းကလေးငယ်များပင်ဝင်ရန်ပင် (လျှင်လျှင်) ငါ့ကိုအလုံအလောက်တင်းကျပ်ရ။
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာကြိုက်နှစ်သက်သည့်မိန်းကလေးအိမ်သို့သွားပြီးလိင်ဆက်ဆံရန်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်သည် (ဆဲဆဲ) အလွန်ရှက်မိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး အားပိုမိုကောင်းမွန်သောဆေးပြားများအကြောင်းပြောရန်စဉ်းစားနေသည်၊ ၎င်းသည်အစဉ်အမြဲဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုနည်းပါးခြင်းစသည့်ညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုမည်သို့လွှမ်းမိုးနိုင်မည်ကိုတောင်မစဉ်းစားသောကြောင့်အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ED သည်သဘာဝဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် rebooting ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယအနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ထူထောင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးကျွန်ုပ်ဘာမှမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။
ကရပ်တည်သကဲ့သို့။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယမြောက်နေ့၌ပဲ ၃ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါဒီထက်ပိုတာကြာခဲ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်တော့ငါဟာသူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုနဲ့အကြာကြီးနေခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါဆိုဘာကိုမျှော်လင့်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ငါတော်တော်စိတ်ပျက်ပြီးစိတ်တိုတတ်ပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂ လကြာအောင်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရပါက ၃ သွားမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းစေရန်သေချာစေလိုသည်၊ ထို့ကြောင့်ငါသည်ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပယ်ရှားပြီးအလွန်အမင်းစိတ်ကူးယဉ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ အခွင့်အလမ်းများပေါ်ပေါက်လာပါက porn ကိုမှန်ကန်သည့်အရာနှင့်အစားထိုးရန်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခွင့်ပြုမည်။
porn ၎င်း၏အမာခံမှာမဆိုအခြားစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူများကဲ့သို့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသောနာကျင်မှုသို့မဟုတ်နာကျင်မှုအချို့ကိုခံစားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ထဲသို့ယူဆောင်လာလေ့ရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ကသူတို့ကိုမှီခိုလာတယ်။ အဆိုပါပြproblemနာကိုသူတို့အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့သည်သင်၏နာကျင်မှုကိုရေတွက်နိုင်သော်လည်းထိုတွင်ပြliesနာရှိနေသည်။ မင်းကြည့်ရတာမင်းကတခြားစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ခံစားမှုအားလုံးကိုရေတွက်စရာမလိုဘဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု (သို့) ခံစားမှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့မရဘူး။
အထီးကျန်ခြင်း၊ ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကြောင့်ဤအရာများသည်ပျော်ရွှင်မှု၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုမှေးမှိန်စေသည်။ ငါကတခြားသူတွေအတွက်မပြောချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ယောက်ျားတွေအားလုံးကငါနဲ့တူရင်မင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေဟာအထူးသဖြင့်မှောင်မိုက်တဲ့အားနည်းချက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အားနည်းချက်ရှိချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏စံနှုန်းများကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ခွဲခြားထားခြင်းကဲ့သို့သောခံစားချက်ကိုမကြိုက်ပါ။ ၎င်းကိုနက်ရှိုင်းသောမျိုးပွားသောကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သင်၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများအားပြန်လည်ရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ကျွန်ုပ်မထိန်းချုပ်နိုင်ဟုအမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရသောအရာတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိပါသည် ။
သင့်မှာအိမ်မှာဒီဂျစ်တယ်နတ်ဘုရားမတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ငြင်းပယ်မှုကိုမခံရတော့ဘူး၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေစရာမလိုတော့ဘူး၊ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားနည်းအောင်လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။ ယခုသင်သည်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးသင်၏ hard drive ရှိအတိုင်းအတာနှစ်ခုလှပသောအလှအပများနှင့်သင်နှင့်ရင်းနှီးနေသလိုပင်ခံစားရပေမည်။ သင့်အား ၁၀၀% အာမခံချက်ရှိသောအခါသင်ဘာမှမစွန့်စားပါ၊ အဲဒီမှာသင်သွား, ပြsolနာဖြေရှင်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ပြproblemsနာတွေကစနေပြီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤအမှုကိုသိကြ၏။ ဒါဟာသံသရာတစ်ခုပါ။ Porn ကိုလုံခြုံရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော် ED နှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၎င်းသည်သင့်အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေပြီး၊ စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရန်စိတ်ကူးသည်ယခုခန့်မှန်းရခက်သည့်ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောက်မက်ဖွယ်အလားအလာဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သဘာဝကသင်သည်အိမ်၌လုံခြုံစိတ်ချရသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ပို၍ ပင်အားကိုးနေရသည်။
သို့သော်အားနည်းချက်သည်လေကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားလာသည်နှင့်အမျှအားနည်းချက်ရှိနေသည် ၎င်းသည်လူ့အခြေအနေ၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအနိုင်အထက်ဘာမျှမရရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းစွာအားနည်းချက်မဖြစ်လိုလျှင်သင်ရရှိနိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာမှုန်ဝါးနေသောမျက်လုံးများနှင့်တစ်သျှူးတစ်သျှူးများဖြစ်သည်။
အရာရာကိုနှစ်ကြိမ်ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးတဲ့ဒီကလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါသိခဲ့ရတယ်။ သူဟာသူမနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးများအပေါ်သူ၏ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်လည်းသူတို့၏နှလုံးသားကိုအောင်မြင်ရန်သူတတ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်သည်။ မနက်ဖြန်ဘာမှမရှိဘူးလို့သူကစွန့်စားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်နေရာရာမှာသူထင်ထားတာကသူအသက်ကြီးလာပြီ၊ ပြီးတော့သူကနှစ်ခါစဉ်းစားမိတယ်၊ ပြီးတော့သုံးကြိမ်မြောက်စဉ်းစားမိလာတယ်၊ ပြီးတော့သူကအခွင့်အလမ်းတွေကိုမယူချင်တော့ဘူးဆိုတာကိုမသိခင်မှာသူဟာကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာပုန်းနေခဲ့တယ်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဖြုန်းတီးပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားသည်။
ငါ 19 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ကိုယ့်အသက်တာ၌လိင်မရှိခဲ့ဘူး။ ငါ porn ကို အသုံးပြု. 13 အခါ masturbating နှင့်ဈ porn မှမှန်မှန် masturbating ပြီအစဉ်အဆက်ကတည်းက starter ။ ငါအစွန်းရောက် porn မကြည့်ကြဘူးနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အသုံးပြု. masturbate နိုင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးမားတဲ့ porn စှဲလမျးသူကိုစဉ်းစားကြဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုယ်တိုင်ကငါ၏အလိင်စိတ်ဖျက်ဆီးခံရပြီးငါ့ကို ED ပေး၏သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂-၃ လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဘဲစိုက်ထူ။ မရပါ၊ စိုက်ထူမှုအားနည်းသည်၊ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝမနှစ်သက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုရှိခဲ့ပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတစ်နာရီရှိပေမယ့်တစ်နေ့ကို ၂-၃ ကြိမ်လောက်ပဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခဲ့တုန်းပဲ။ ဒါကြောင့်ငါအပျိုဖော်ဝင်သောအခါအားနည်းသောစိုက်ထူမှုရှိသည့် အချိန်မှစ၍ နှစ်အတော်ကြာမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်စေပြီးအသစ်ကဲ့သို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါတစ်ခုခုမှားကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါ ငါက googled - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်။ ငါအဖြေတွေ့ပြီထင်ပေမယ့်မလွယ်ဘူး ၂ ပတ်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုငြင်းပယ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါကိုယ့် porn စွဲခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ဆိုလိုတာက PMO မရှိတဲ့အချိန်ကတည်းကကျွန်တော့်ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အိပ်မက်တွေကကျွန်တော့်ကို porn ကြည့်နေတာပဲ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနောက်ဆုံး PMO ပြproblemနာကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ငါ 08/01 တွင်စတင်ခဲ့ပြီးတစ်ပါတ်အကြာတွင်ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့်ရံဖန်ရံခါနံနက်သစ်သားရှိခြင်း, ငါ့လိင်စိတ်လျော့နည်းသွားပေမယ့်ငါ့စိုစွတ်သောအိပ်မက်တွေကိုဆက်လက်ရှိခဲ့သည်။ ၂ ပတ်ခွဲပြီးနောက် - ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လိမ့်မည်။ ငါအိပ်မက်ထဲမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအော်ဂတ်စ်! ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကဒီလိုလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်လုံးဝဆိုးရွားစွာခံခဲ့ရပါတယ် ငါဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်2ရက်အကြာကကိုယ့်ပြန်လာသောနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ။ အခုတော့ဒါကအလွယ်တကူပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါအရမ်းစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုပါ။
ငါသည်ငါ့ ED ဖို့အကြောင်းမရှိ porn ဖြစ်ပါသည်စဉ်းစားကြဘူးသော်လည်းငါ့ဦးနှောက်ကိုညစ်ညမ်းလိုလားကတည်းကညစ်ညမ်းတဲ့ပံ့ပိုးအချက်ဖြစ်တယ်, porn ငါ့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွား masturbate ချင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလိင်ငါ့ကိုကုန်ခမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စေသည်။ ငါကယနေ့ခဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြောင်းမကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ကတည်းက PMO မရှိဘဲရက်သတ္တပတ်သူတို့စုံတွဲအကူအညီနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ထင်တဲ့ငါ Semi-ခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကြောင့်ပျော်မွေ့လုပ်ခဲ့တယ်သို့သော်ကအလုံအလောက်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏, ကိုယ့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မ အဆုံးတိုင်အောင်အပေါ်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဈငါမြဲရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကဤနေရာတွင်သင်ကယောက်ျားတွေနဲ့ငါ့တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်ရွေးကောက်သဖြင့်, ဈကောငျးကြိုးအတှကျ PMO စွဲ၏ခြေသည်းများထဲကဆွဲထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီတော့ဒီမှာငါကဒီမှာဖြစ်၏ငါ၏အ tracker, ငါ့ရည်မှန်းချက်ယခုမှာအနည်းဆုံး2လအတွင်းထွက်သည်ကိုကိုင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါကဒီငါ့အားဖြစ်ပျက်ကြကုန်အံ့, ရှက်ကြောက်ခြင်းခံစားရအဖြစ်ကိုယ့်ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘယ်သူမျှမပြောနှင့်ပြီကတည်းကငျသညျငါ့ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကံယောက်ျားတွေအပေါင်းတို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံးငါ့ကိုဆန္ဒရှိ!
21 နှစ်အဟောင်း strugggggling
ကျွန်ုပ်သည်အငယ်တန်းကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ငါ 13/14/15 (ထို့နောက်တစ်နေရာရာမှာထိုအချိန်က) အကြောင်းကိုအကြောင်းကိုကတည်းက Porn ကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ကြရတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ED နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာများရှိခဲ့သော်လည်းဘယ်တော့မှ PMO မလုပ်နိုင်ပါ။ ငါအကြီးတန်းနှစ်က HS ကနေဒုတိယနှစ်အထိ gf ရှိခဲ့နှင့် (ငါသူနှင့်အတူရှိနေစဉ် PMO နေဆဲမယ်လို့ပေမယ့်လိင်ပြaနာမဟုတ်ခဲ့ပါ) လိုလူတိုင်းကဲ့သို့ကောလိပ်ကျောင်းအတွက်တစ်ခုတည်းဘဝစမ်းချင်တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအဘယ်သူမျှမကိစ္စများပေမယ့်ငါပတ်ပတ်လည်မိန်းကလေးများတကယ်မရှိသောကတည်းကငါနွေရာသီအဘို့အိမ်ပြန်သောအခါ PMO (တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်) မြင့်တက်လာပုံရသည်။ ငါဒီအတိတ်ကျဆုံးခြင်းစာသင်ရဲ့အဆုံးမှာအဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကအရမ်းပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပါတီပွဲကနေပြန်လာပြီးအဲဒါကိုခြုံဖို့အချိန်မရောက်မချင်းအဆင်ပြေတယ်။ ငါကအရက်ကိုအပြစ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ive အရင်ကအရက်မူးပြီးထွက်လာကတည်းကဒါကတကယ့်ပြissueနာမဟုတ်ဘူး။
လူတွေဟာသူတို့ခဏတာပါးစပ်ပါးစပ်နဲ့ရွတ်နိုင်တာ၊ မခံစားရဘူး၊ ကွန်ဒုံးတွေနဲ့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့စတာတွေစတာတွေမြင်ခဲ့ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ PMO ကိုပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်မှနုတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအကြိမ်များစွာပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ငါနှင့်အတူအိမ်သို့သွားသောတကယ့်ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေသေးသည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုမှာ (L-arginine, yohimbe, horny ဆိတ်ပေါင်းပင်နှင့် Maca ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်သုံးသည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်မအောင်မြင်ပါ။ ငါ P ကိုအပြည့်အဝဖြတ်တောက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ ငါဒီမှာထောက်ခံသူတွေနဲ့လူတွေကဒီနေရာမှာစကားပြောဖို့အရမ်းအားရတယ်။ အနာပျောက်စေခြင်းငှါစောင့်ဆိုင်းပေမယ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြုရ ပထမ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
LINK - အကြှနျုပျ၏နေ့ 48 Catharsis ငါနောက်ဆုံး4နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့များအတွက် ED တိုက်ခဲ့ကြရတယ်။ ငါအချိန်အများစုအတွက်ရှည်လျားသောရည်းစားရှိခဲ့တယ်, PMO ကငါ့ရဲ့အဓိကလိင်ဆက်ဆံမှုပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါဟာညစ်ညမ်းတဲ့မကျန်းမာနိုင်လောက်တဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းအောင်ဘယ်လိုညစ်ညူးစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဌာန်းစာအုပ်ပုံဥပမာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ [TRIGGER WARNING] ကျွန်တော် nofap မစခင်မှာဗီဒီယို ၁၀ ခုဖွင့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာအဲဒီ“ ပြီးပြည့်စုံတဲ့” မြင်ကွင်းကိုရှာရန်တစ်ယောက်ချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူကို“ ဖြောင့်သော” ကောင်လေးလှည့်စားခံလိုက်ရသည့်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်မှလိင်ပြောင်းလဲခြင်းအထိအရောင်တောက်တောက်အထိတိုးလာခဲ့သည်။ ရှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယဝင်ပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့တောင်အောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံခဲ့တယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်၊ လူတွေနဲ့ဝေးကွာသွားပြီးအရင်ကတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ တိုတိုပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာရေထဲနစ်နေတုန်းပါဘဲ။ YBOP နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကို r / nofap တွင်ဖတ်ရှုသည်အထိကျွန်ုပ်2+2ကိုအတူတကွမထားခဲ့ပါ။ မင်းရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာမသေချာပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင် E-fuck ဆိုတဲ့-nough ခဲ့ ငါယူခဲ့ပါတယ်အတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ copious ပမာဏကနေရလဒ်သောအရှက်ကွဲခြင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, နောင်တနှင့်အရှက်၏။
ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံး ၄၈ ရက်အတွင်းတိုက်တွန်းမှုများရှိခဲ့သည်။ အောင်မြင်ရန်အစွမ်းသတ္တိများစွာယူထားသောအားကြီးသောသူများ၊ သို့သော်အတွေးသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုပြန်လည်သက်ဝင်စေရန်ပင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ထိုအရှက်ကိုစဉ်းစားမိပြီးကျွန်ုပ်၏လမ်းစဉ်ကိုမှန်ကန်စေခဲ့သည်။
ငါကောင်မလေးမဖြစ်ချင်တော့ဘူး၊ ကောင်မလေးဘေးမှာအိပ်မောကျနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေတာကိုငါမလိုချင်ဘူး၊ အမှောင်ခန်းထဲမှာအဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နောက်ထပ်စကားလက်ဆုံမပြောချင်တော့ပါဘူး။ အလုပ်၊ ပိုက်ဆံ၊ et al.
ငါဘီယာအနည်းငယ်သာစားသည့်အချိန်တွင်ဝီစကီဒစ်ကိုသိရန်လိုသည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့် ငါနေမကောင်းဖြစ်ပြီး၊ ငါနှင့် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုငြီးငွေ့နေတယ်။ ဒါကြောင့် ... ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အရေးယူတာပါ။
ဒီခရီးကို ၄၈ ရက်ပဲရောက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအခုအချိန်မှာနည်းနည်းပြားနေတယ်ဆိုပေမယ့်ငါလုပ်နေတဲ့အရာဟာငါဟာအခုအချိန်မှာထက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာငါဘယ်တော့မှသေချာမသိဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာတယ် ငါစာဖတ်ခြင်းသို့စာမျက်နှာ 48 ပေါ့ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး။ ငါပုံသဏ္intoာန်ရပြီနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါထွက်လာပြီ၊ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။ ငါစနစ်ကိုယုံကြည်တယ်၊ အဲဒါကအများကြီးကူညီပေးနေတာပဲ။ ငါ nofap စကတည်းကလိင်မဆက်ဆံဘူး၊ ဒါပေမယ့်အချိန်တန်တဲ့အခါငါဖျော်ဖြေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာငါသိတယ်။ ငါသေချာပါတယ်
ရုန်းကန်နေရသူများကိုသင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ကြောင်းသိစေရန်ဤစာကိုကျွန်ုပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရေးသားခဲ့သည်။ ရှေ့တွင်ခက်ခဲသောအချိန်များရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်အဆုံး၌ပေးချေမှုသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ သင်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ပြန်၍ ရနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ယခင်ကထက်ပိုမိုကြီးထွားလာပြီး၊ လိင်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်လာနိုင်သည်။ နင့်ကိုငါအရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုမှီခိုအားထားပါ။
ဒီမှာထောက်ခံမှုဟာအကြိမ်အနည်းငယ်ထက်ပိုပြီးငါ့ရဲ့ကျောက်တုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဒါကအနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ နေ့ ၉၀ မှာကျရင်နောက်မှတွေ့မယ် AMA ။
LINK - ကျွန်ုပ်သည် ၃၅ နှစ်ရှိပြီးယူကေတွင်နေထိုင်သည်။ ထုံလိင်တံ (မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်လွန်ခဲ့သော5လခနျ့အကြှနျုပျအပျေါသို့ဆင်း သွား. ငါ: ငါတော်တော်မကောင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ တိုက်ရိုက် ဘာမှမခံစားရနိုင်) နံနက်စိုက်ထူခြင်းမရှိ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ဘာမှမသုတ်သင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်၏လက်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သာခဲယဉ်းနိုင်သည်။ သို့ ဘာမှမ ငါကရယ်၊ ဖရဲသီးတွေနဲ့စမ်းကြည့်တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါ (တစ်သက်လုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မပြုဘဲတစ်နေ့တာတစ်ခါတစ်ရံ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိ) ကျွန်ုပ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးတစ်သက်တာတခါတရံတွင်အလွန်တရာမှေးမှိန်တတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့် (၅) နှစ်တာကာလအတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုနေ့စဉ် (သို့) လျော့နည်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက် porn ကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်တကယ့်ဘဝနှင့်အစားထိုးဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေသော်လည်းငါ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျရှိ၏ ငါကအော်ဂဇင်ကိုတစ်နာရီလောက်ယူပြီးချိန်အထိရောက်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် SSRI ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ကျမှု (၁၀ နှစ်) (Paxil) တွင်လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ ငါဟာလိင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပြီးစိတ်ဓာတ်ကျပြီးဂရုမစိုက်တဲ့အတွက်အသက် ၂၀ ကျော်မှာဘာကိုမှသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၀၊ အောက်တိုဘာလ (ငါအသက် ၃၃ နှစ်) ကတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ် (ဘာကိုမသိခဲ့ဘူး) ။
ထိုအချိန်မှစ။ ငါကွဲပြားခြားနားသောမိန်းမနှစ်ယောက်တည်း (သူတို့ထဲက 8 ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်), သူတို့ထဲကတ ဦး တည်းကြွင်းသောအရာပေါ့ပေါ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ Viagra ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၁၈ လအတွင်း ၄ ကြိမ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သည်။ my ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည် (Viagra ထံမှ) ခက်ခဲသော်လည်းလုံးလုံးလျားလျားဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုတွေ့ဆုံမှုများမှလုံးဝကျေနပ်မှုမရခဲ့ပါ။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအတွေးကဆေးပြားခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကတည်းကတို့ကိုခုတ်လှဲ2months ago လုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှသော်လည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါဆေးပြားဖြတ်ပြီးနောက်, ပင်နှစ်, Paxil တိုးတက်ရေးပါတီ (ထောက်ခံမှုဖိုရမ်) တွင် သွား. အခွားသူမြားစှာလကြာအတိအကျတူညီပြဿနာများကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ anti-စိတ်ကျရောဂါရုံအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကဲ့သို့, dopamine receptors (အလွန်အကျွံ serotonin သူတို့နှင့်အတူလောင်ကျွမ်း) ကိုဖျက်ဆီးပုံရသည်။
ငါနောက်ပိုင်းမှာဂယ်ရီ Wilson ၏ဗီဒီယိုများအပေါ်ထိမိ။ လဲခြင်းနှင့်ယခုစဉ်းစားရန်အဘယျသို့မသိ - ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာဆေးပြား, အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အင်တာနက် porn ၏ရလဒ်သို့မဟုတ်ငါဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင်းငါ့အသက်တာ၏ဤမျှလောက်သုံးစွဲခဲ့ရုံ အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်ရင်းနှီးသောငါ့ကိုထွက် freaks? ဒါမှမဟုတ်သူတို့အားလုံးလား။ အခု ၁၅ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုမသုံးတာ၊
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာချိန်းတွေ့တဲ့နေရာမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ ငါတို့ကဝိုင်သောက်တယ်၊ စကားပြောတယ်၊ အိပ်လိုက်တယ်။ ငါသူ့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခဲ့တယ်။ ငါဘာမျှမခံစားခဲ့ရ: ထုံ, သေပြီ, ထွက်မီးရှို့, ပျင်း ... uggghhh ။ နောက်တစ်နေ့တွင်သူမနှင့်ကျွန်ုပ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (စိုက်ထူမှုများမှာအဆင်ပြေသော်လည်း၊ ထုံထိုင်းခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မွေ့ရာဖြစ်ခြင်း - ငါလုံးဝနီးပါးဘာမှမပျောက်ပဲ) ။
ငါ၏အဦးနှောက်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ငါ့လက်ကို အသုံးပြု. နှင့်အတူအော်ဂဇင်ပေါင်းသင်း re-ကြိုးထားပြီးလျှင်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါ masturbating မပါဘဲ 8 ရက်ပေါင်းသွားကွိုးစားခဲ့ပေ။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါသည်အလျင်အမြန်ပိုပြီးတို့သည် လာ. ခဲ့ဘူးတဲ့အခါမှာဒါဆိုငါနှစ်များတွင်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲထုံခံစားခဲ့ရနှင့်နေဆဲခဲဘာမှ ejaculated ။ ဒီတော့ဒီမှာကြှနျုပျတို့သညျသှား။ ငါအထီးကျန်မှုတွေနဲ့အထီးကျန်နေမကောင်းဝေးကမ္ဘာမှပုန်းအောင်း၏နေမကောင်း, ငါ့ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်ဆေးပြားနဲ့ငါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအဆိပ်သင့်စေ၏နေမကောင်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်သို့ထွက်ပြေးလာသူများနေမကောင်းဖြစ်၏။
ငါအမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တကွဖြစ်မယ့်အစားကိုယ့်မြေတပြင်လုံးအရာကနေတသန့်ခံစား၏စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောလိင်အပျော်အပါးခံစားချင်တယ်။ ဆေးပြား, အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ porn အမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းနှင့် detach လုပ်လိုက်သောလာပြီးကျွန်မတို့ငါ့ကိုစွန့်ပစ်ကာလေ့လာသူများကဲ့သို့ nature- ပါပြီ။
LINK - အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီမှာအသစ်ဖြစ်နေပြီးရှာဖွေမှုအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ဒီ site ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒီမှာငါ့ဇာတ်လမ်းပါ ငါအချို့အတွေ့အကြုံ, လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်မျှော်လင့်ပါတယ်! သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဘာသာရပ်အားဖြင့်သိကြသကဲ့သို့ငါ 40 ဖြစ်၏။ အစဉ်မပြတ်ငါအိပ်မပျော်၌ထင်ရှားစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ anti-လူမှုရေးအခြေအနေများအချို့ကိုဒီဂရီခဲ့ကြ.
ငါ့ဘဝမှာစွဲလမ်းမှုကကြီးမားခဲ့တယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။ ငါ 12 နှစ်အတွင်းသောက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် ငါသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးပေမယ့်ဘယ်တော့မှခဲယဉ်းတဲ့ပြhadနာရှိခဲ့ဘူးသော SSRIs အမျိုးမျိုးအပေါ်ဖူး။ လောလောဆယ်ငါ SSRI မရှိဘူး သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းလိင်စိတ်အဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားဆေးဝါးများ။ ငါ Viagra ရှိခဲ့ပြီ, Cialis ငါ့အတွက်သတ်မှတ်ထားပေမယ့်သူတို့ကအရမ်းစျေးကြီးတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ငါ့သမိုင်းအလွန်ရှည်လျားသည်။ ကျွန်တော် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းနာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဘယ်တော့မှတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ထက်မကနေ့စဉ်နီးပါး။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါဒါကောင်းကောင်း / မကြာခဏကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်သောကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သလား
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ တွင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၉ နှစ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးလက်ထပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယောနိကိုသုက်လွှတ်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်အမြဲတမ်းရှိသည် - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအလွန်မြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းကြောင့် - မိန်းမသည်ပါးစပ်သို့မဟုတ်ယောနိ၏ခွန်အားနီးပါးမဟုတ်ပါ။ ငါသည်လည်းကွန်ဒုံးထဲမှာသုတ်ရည်လွှတ်ဘူး။ ငါကိုယ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကို“ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်” တစ် ဦး ထက် ပို၍ နှစ်သက်သည်၊
ငါကွာရှင်းခြင်းမပြုမီ - ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်အတူတကွတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ ငါကလိင်ထက်ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းသည်ဟုသူမ၏ယုံကြည်သည် ငါကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါဝေးလံသောဝေးလံသောဆက်ဆံရေး၌စေ့စပ်ခဲ့သည် သူမသည်အပျိုစင်တစ်ယောက် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်“ ခဲယဉ်းခြင်း” နှင့်မည်သည့်အခက်အခဲမျှမကြုံဖူးသော်လည်းသူမအတွင်းပိုင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါဝင်ရောက်ခြင်းမှာရှားပါးလှသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဝေးကွာသောကြောင့်ဤကိစ္စအတွက်သူမ၏မြင်နေခဲ့သည်။ သူသည်အပျိုစင်ဘ ၀ ဖြစ်သောကြောင့်“ ပုံမှန်” အဘယ်အရာကိုမသိခဲ့ပေ။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို - ငါပြန်အိမ်ထောင်ပြုသည် - ယခင်မော်ဒယ်လ်ဖြစ်သည်။ သူမသည်အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုသူဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲသောအချိန်ရှိနေသေးသည်။ သူမသည်၎င်းသည်ပြit'sနာတစ်ခုဟုထင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းတဲ့မရသေးသောငါ့ ED ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ဒီမှာငါနဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံပါ။ ဒီဖိုရမ်ကိုထိမိချိန်မတိုင်မီငါအင်တာနက် porn ကိုတစ်နေ့မှာတစ်ကြိမ်နီးပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်။ ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်အချိန်ဇယားအလုပ်လုပ်ဒါငါတယောက်တည်းအချိန်အများကြီးရှိသည်။ ငါ၏အအတော်များများငါ 1-2 နာရီကြာလူရှုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤဖိုရမ်များမှဖော်ပြသောနိမိတ်လက္ခဏာများအားလုံးကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။ လိင်တူချစ်သူတွေ၊ ရင့်ကျက်တဲ့ညစ်ညမ်းမှု၊ လူငယ်ညစ်ညမ်းစတာတွေ။ ငါဟာလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဘူး၊ pedophile မဟုတ်ဘူး၊
မကြာသေးမီကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်ပင်စိုက်ထူရန်ခက်ခဲသည်။ တခါတရံမှာ flaccid မှာအော်ဂဇင်ကိုငါရတယ်။ ဒါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးလား။ ဒီနှင့်အတူမည်သည့်အတွေ့အကြုံကို? Cialis ၏မြင့်မားသောဆေးညွှန်းများ၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်စဉ်ခက်ခဲသောအချိန်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ငါ cunnilingus ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာ - ငါပျော်မွေ့ရာ - ငါအားလျော့သွားပါ။
ငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကစပြီး ED လက္ခဏာတွေကိုသတိထားမိပြီးသူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာတယ်။ ငါရက်သတ္တပတ်အတွင်းညစ်ညမ်းမှုကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးပေမယ့်သုံးရက်အတွင်းနိုးထလာသည်နှင့်အမျှမနက်ခင်းသစ်ပင်များသည်အများအားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဒီမီးထဲလောင်စာဆီထည့်ဖို့ငါတို့မှာအိမ်ထောင်ရေးပြproblemsနာတွေရှိနေတယ်၊ ​​ငါစွဲလမ်းနေတဲ့ငါရူးတော့မယ်။ ငါ porn ကိုရှောင်ရှားရန်အဘယ်သူမျှမပြhadနာမရှိခဲ့ပါ - ဒါပေမယ့်ငါဇနီးနှင့်ပတ်သက်။ အမြင်အာရုံမြင်ကွင်းများအပေါ်အခြေခံပြီးငါပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနှစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပါပြီ အကြှနျုပျ၏အလိုအလျောက်စိုက်ထူသွားပြီနှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါ့လိင်တံသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားသည်။ ဒါကနည်းနည်းနာပါတယ် အဆိုပါ glans နှင့် urethra ။
ကျွန်တော့်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကျွန်တော့်ဆရာဝန်က testosterone ဟော်မုန်းစမ်းသပ်တယ် သူက ၃၄၀ ပဲ။ သူကစိတ်မဝင်စားဘူး၊ ပုံမှန်အဆင့်ပဲလို့ပြောတယ်၊ ငါစိုးရိမ်ရင်ဆီးရောဂါအထူးကုဆရာဝန်နဲ့တွေ့သင့်တယ်။ ငါနောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့မယ်။ သို့သော်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ အိမ်ထောင်ရေးပြproblemsနာများနှင့်နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအကြားကျွန်ုပ်သည်ထိုပြwhatနာနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာပေ။ ကျွန်တော့်ဘ ၀ အများစုမှာနောက်ပြissueနာတစ်ခုရှိသေးတယ်။
ရံဖန်ရံခါ - သန္ဓေတည်ပြီးနောက် ၃X / တစ်နှစ်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုးသွမ်းသောမီးလောင်ကျွမ်းတတ်သည် - များသောအားဖြင့်မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်။ တစ်နာရီခန့်မီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီးအိမ်သာတွင်ထိုင်။ “ သေးငယ်တဲ့အပင်လေးများ” ကိုလုပ်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအတော်လေးလျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းပါတယ် ဒီမှာရှိတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ရှိလား။
Freedom ကိုမှ LINK- နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
ဤ blog ငါ၏အညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့အကျင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ပပျောက်ဖို့အများကြီးလုပ်ရပ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသွားဖြစ်ပါတယ်။ ငါအားလပ်ရက်အပေါ်ပေမယ့်တစ်ချိန်ကကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌အစဉ်မပြတ်ငါမွှေးကဲ့သို့ခံစားရအရာကိုပြန်လာနှင့်ဤသစေပင့်ကူ၏ထွေးပိုက်ခံထိုက်သည့်အခါရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုအဘို့ကလွယ်ကူအလုံအလောက်ရှာတွေ့မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီ။ အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ (၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်၊ ယခုကျွန်ုပ်အသက် ၄၅ နှစ်) တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေသည်ဟုမခံစားရပါ.
ကျွန်ုပ်သည်ကလေးဘဝ၌အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရသည် (ကျောင်းနှင့်အိမ်တွင်အနိုင်ကျင့်ခံရသည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှဖြစ်နိုင်သည်။ မိဘများသည်စာနာခြင်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းမှုစွမ်းရည်များနည်းပါးသော်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သော်လည်းမိဘများအနေဖြင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်မှဖြစ်နိုင်သည်) သို့သော်၎င်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ်အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဟုကျွန်ုပ်မခေါ်ပေ။ အဲဒါကိုရှက်ကြောက်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းပြandနာတွေနဲ့ကျောင်းသွားတဲ့အခါအစာအိမ်နာမှာရယ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့ခံစားချက်တွေဒါမှမဟုတ်ငါ့အဖေကငါ့ကိုတစ်ခုခုတောင်းဆိုနေတာဒါမှမဟုတ်သူလုပ်ပေးမယ့်အရာတွေကိုအခြေအနေတွေချတဲ့အခါမှာငါခေါ်လိမ့်မယ်။ ('ခြံစည်းရိုးပန်းချီဆွဲရင်ကျောင်းခရီးကိုသွားနိုင်တယ်') ။
ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးလမ်းကအိပ်ပျော်နေတဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပုံရတယ်။ ငါကြောက်လန့်မည့်အစားနေ့စဉ်အိပ်ရာဝင်ရန်မျှော်လင့်နေခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ပျော်နေသောအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွတ်တိုက်စဉ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံစာအုပ်များသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းများကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြိုးစားခြင်းကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသတိပြုမိသည်နှင့်သတိပြုမိသည်။ ငါရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲးးငါတို့ရဲ့ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် ငါအသက် 80 မှာကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့မှီတိုင်အောင်အိပ်စက်ခြင်းမပြုမီညတိုင်း။
အဲဒီအချိန်မှာတောင်မှငါဟာအစည်းအဝေးတက်တဲ့အချိန်တွေမှာလမ်းလျှောက်တတ်တယ်။ ငါရပ်လို့ရမလား၊ ငါစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ပေမယ့်အဘယ်သူမျှမအလွန်အမင်း စခန်းချနေတုန်းလူငယ် Hostel Dorms မှာအခန်းတစ်ခန်းကိုဝေမျှတဲ့အခါငါတုန်ခဲ့တယ်။ ငါရုံညင်ညင်သာသာဆွဲ, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တစ်သျှူးသို့လာနိုင်ခဲ့သည်။ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်။ တခါတလေအော်ဂဇင်ကသနားစရာကောင်းတယ်၊ ငါမပျော်ဘူးလို့ခံစားရပေမဲ့အဲဒါကငါ့ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး ငါရံဖန်ရံခါအတော်လေး softcore, Porn Mags, Penthouse, ကလပ်ဝယ်ငါ porn ကြိုက်နှစ်သက်ခံရဖို့မကြိုက်ဘူး။ ငါကလျှို့ဝှက်ထားရှိမည်။
ဗွီဒီယိုတွင်သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးများထည့်ထားသည့်အရာများစွာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေရန်အတွက်လွယ်ကူသည်၊ ထောင့်ဆိုင်များမှကောင်တာအောက်တွင်သိုထားသောမိဘများအောက်ခြေအံဆွဲများ၌တွေ့ရသောအရာများ။ မိန်းကလေးတွေကသိပ်မကောင်းဘူး။ တည်းဖြတ်ကင်လုပ်ခိုင်းနှင့်သဘာဝ။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ မိန်းမတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အတွေးနဲ့မထိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောဆန္ဒများကိုရရှိပြီး၊ Orgasm ကို ၂-၃ ကြိမ်ဆက်တိုက်အဆက်မပြတ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ တစ်ခါက Cologne (စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ကောင်းသောဖောက်သည်များ၊ ကောင်းသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာ) ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် Cape Town ရှိဗီဒီယိုပြခန်းလိင်ဆိုင်တစ်ခုမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ခါစလုံးသည်ထိုအဆောက်အအုံများကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်လည်ပတ်ရန်မတားဆီးနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ငါမလိုအပ်ဘဲငါညစ်ပတ်ညစ်ပတ်နေပြီးစိတ်ပျက်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထင်သောလူမဟုတ်ချေ။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ
ရည်းစားသညျ လာ. သွား. ကနဦး fumbling- ငါမကြာခဏပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်အစည်းအဝေးများများအတွက် Ed ခံခဲ့ရပြီးနောက်လိင်ကောင်းသောတယ်။ ထိုအခါငါ၏အသုံးဆယ်ကိုငါအထူးသဖြင့်ကွန်ဒုံးပတ်လည်မှန်မှန် ED ရဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ငါမဟုတ်လျှင်သူမနှင့်ထိုးအတွင်းမှအလျင်အမြန်တောင့်တင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရအဖြစ်အပေါ်တစ်ဦးကွန်ဒုံးရယူခြင်းတစ်ဦးအရူးအလုအယက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကနည်းနည်းအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဇုန်၏လိင်ကိုဖန်ဆင်းငါ့ယခင်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရုန်းကန်။ (စသည်တို့ကိုကိုဆုံး) ဆေးပညာအာရုံစိုက်မှု၏တစ်ဦးကတရားမျှတနည်းနည်း 34 မှာ SSRI ပေါ်မှာငါနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ငါဥပမာအားဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်ပြproblemsနာများရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြthisနာဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာသိတဲ့ ၆ လ၊ ၁၂ လဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်ထိတ်လန့်မိသည်။ ငါသည်ငါ့မိသားစုဆရာဝန်နှင့်စကားပြောပေမယ့်ဘယ်မှာမျှတယ်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် UNI ၌သခင်နှင့် broadband နှင့်ဤမှော်ဆန်သောအရာသို့ပြန်လာခဲ့သည်။ တစ်နေ့မှာတော့အပြစ်မဲ့ရှာဖွေရေးဝေါဟာရတစ်ခုကမိန်းကလေးများတစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့မျက်နှာပေါ်လာစေတဲ့ဗီဒီယိုဆိုက်တစ်ခုပေါ်လာစေတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုစကားလုံးတွေနဲ့ပြောဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ငါမယုံနိုင်ဘူး၊ မိန်းမတွေဒီလိုမျိုးမယုံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တွေ့ဆုံချင်တယ် ကံမကောင်းစွာပဲမကြာမီကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကွန်ပြူတာခန်းထဲမှာနောက်ကျကျန်နေသည်။ အိုးအရှက်ကွဲခြင်း!
ဒါပေမယ့်ဒါကကျွန်တော့်ကိုလာစေပြီး SSRI တွေကြောင့်ငါပြင်းထန်သောကြက်ညှာများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရောင်ရမ်းခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဤစိတ်ပျက်လက်ပျက်သို့ကျသွားသည်။ နာရီများစွာ၊ ပထမပုံများ၊ ကလစ်များ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောဗွီဒီယိုများနှင့်ယခုဂျပန် hardcore ၏ HD ဗီဒီယိုများကိုမျှဝေခြင်းကိုစိတ်မရှိဘဲရှာဖွေခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် (၇ နှစ်) (ရက် ၂ နှစ်မှသုံးနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ကန့်သတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍) ရှောင်ရန် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆွဲအားသည်၎င်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုသိသိသာသာပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဒါကြောင့်ငါအဖုံးများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုအဆင်သင့်ထောက်ပံ့ရေးရှိခြင်းမကြိုးစားခဲ့ဘူး, ဒါကြောင့်ငါအလေ့အထအပေါ်7မိနစ်ဖြုန်းနိုင်ပေမယ့်ယခုနှင့်ထို့နောက်ငါမနက်2နာရီနှင့် 10 နံနက်တိုင်အောင်ဖြစ်၏။ (ထိုအခါငါအခန်းတခန်းတည်း၌ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူဤအမှုကိုပြု !!) သူမသည်ငါကဲ့သို့သောကောင်းသောအလုပ်သမားဖြစ်ကြောင်းကိုထင်၏။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်အလုပ်ခွင်တွင်ခံစားခဲ့ရပြီးအမှန်တကယ်အလုပ်တစ်ခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအခြားတစ်ခုမှမလိုအပ်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ငါရှုံးနိမ့်သွားပြီးငါနဲ့ခွဲနေတယ်။ ငါကဆက်နွယ်မှုမဟုတ်ကြောင်းပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်လည်းပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြားအမှုအရာရှိသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ ဒီတော့ဒီမှာသွား။ တစ်ရက်မှာတစ်ရက်၊ ရက် ၆၀ ကိုရည်မှန်းချက်ထားနိုင်အောင်။ ငါ့ကိုကံကောင်းပါစေ၊ အားပေးပါ၊ ချစ်ပါ။ ငါကအခြားသူတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် ဒါကငါဒီဘလော့ဂ်ကိုရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ
LINK - ပထမ ဦး စွာအခြား Re-booting, ED blogger ဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုချိန်ညှိ။ အခြားလူများ၏ဘလော့ဂ်များအတွက်ရှာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဉာဏ်ပညာစကားလုံးများကိုမဆိုထည့်နိုင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးပြီးအပျိုစင်ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျောင်း၌မိန်းကလေးများနှင့်အလွန်ရေပန်းစားခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တစ် ဦး၊ နှစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်သောအခါငါအလျင်အမြန်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူပန်စွာမိန်းကလေးတစ် ဦး က 'လာသောသေတ္တာပေါ်တွင်' တွေ့သည်ဟုထင်သည် 'ဘာထင်လဲ
သူတို့ကြီးပြင်းလာတာသူတို့ဟာမင်းလိုပဲသိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနည်းငယ်သာသိခဲ့ရသည်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်တွေကြာအောင်ကျွန်တော့် V ကိုမဆုံးရှုံးစေနိုင်လို့ပါ။ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်ကိုမြန်မြန်ရောက်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ပရာ့ဂ်တွင်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလူရွှင်တော်များ (ကံကောင်းသည့် gits များ) နှင့်အတူရှိနေပြီးအစီအစဉ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအချက်မှာအနီရောင်ခရိုင်ဖြစ်သည်။ ငါအချို့သောဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Viagra ဝယ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါ့ဖုန်းပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလက်ဖြင့်မပူမီနွေးရန်ကြိုးစားသည်။ မခွာဘူး စိုးရိမ်ပူပန်မှုကကျွန်တော့်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီးမင်းပေးဆပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အခါသူမကငါ့ကိုပါးစပ်ကိုစပြီးပေးတယ်၊ ငါအရမ်း relax နေ relax အေး, နေ, တော့မယ်၊ သို့သော်ဘာမျှမ ... ထိုအရာအလုံးစုံစတင်ခဲ့သည်ဤအရပ်သည် ... ..
နောက်နေ့ညမှာဘားတန်းမှာကျွန်တော်ဒီမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်၊ ပရာ့ဂ်မြို့မှာ၊ ငါလန်ဒန်မှာငါ့နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့နေရာမှာနေတယ်။ ထိုညတွင်သူမလည်းသူမနှင့်အတူသွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပြောစရာမလိုသော်လည်း၎င်းသည်မလိုလားအပ်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုတိုပြောရရင်နောက်တစ်နေ့ထပ်တွေ့မယ့်သူမနောက်တစ်နေ့ထပ်မံတွေ့ဆုံရန်သေဆုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများရှေ့တွင် ၁၀၀ ပေရှေ့မှာကျွန်တော်နှင့်ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့သည့်ဘားသို့စစ်တပ်ချီတက်လာသောအခါသူမနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ပြန်သည်။ နောက်တစ်ခေါက်မနက်မှာသူမနဲ့အတူအိပ်ခဲ့ရတယ်၊ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိခဲ့ပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သော်လည်းသူမကကျွန်မရဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုလုံးဝမူးယစ်ဆေးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုသူမယုံကြည်သည်။
Chase သို့ဖြတ်တောက်ခြင်း ... ထူးခြားသောအရှည်များသို့သွားပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်လကြာလျှင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးထိုအချိန်အတွင်းငါသူမနှင့်ပုံမှန်စိုက်ထူခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အသက်တာ၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုတစ်ခါမှမရခဲ့ဖူးပါ။ သို့သော်…ဤတွင် IM ရေးနေရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုသည်တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ် ၁၀၀% အထိရောက်သည်သို့မဟုတ်ထိုးဖောက်နိုင်လောက်အောင်ပင်ခက်ခဲခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်များ
ငါလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အစားအသောက်အပေါ်အလွန်အကျွံကြောင့်ငါ၏အ T ကအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်သူမ၏ပြော - မှား! ထိုအခါငါဆေးဘက်ဝင်လိင်တံလက်စွပ်ဖြစ်သော MYTENRING ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သွေးကြောပေါက်ကြား (google နှစ်မျိုးလုံး) ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမထောက်ပြသည့်အတိုင်းနံနက်သစ်သားမရှိ၊ သူမစိတ်ပူပန်နေတဲ့ကောင်မလေးပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါသူမကိုလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့မခံစားရဘူး။ ဒါကြောင့်အချို့သောဂူဂဲလ်ကစားနည်းအပြီးမှာကျွန်တော်ဟာသွေးယိုစိမ့်မှုဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မှာပြproblemsနာတွေကြောင့်သင့်ရဲ့လိင်တံဟာသွေးပြန်စီးဆင်းမှုများစွာရှိခြင်း၊ ၎င်းကိုမွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်စေခြင်းဖြစ်တာမို့စိုက်ထူခြင်းအတွက်အလွန်ခက်ခဲစေပါတယ် ဒါကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိင်တံလက်စွပ်သည်သွေးကိုစုပ်ယူပြီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုရရှိသည်။
နောက်ဆုံးတွင်သူပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်သူမပြန်ပြင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ငါလုပ်မယ် နှစ် ဦး စလုံးအရေအတွက်တွင်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေပေါ်မှာ ဦး နှောက်ကိုအမြဲမြင်ဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့ပြproblemနာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ' ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ဆိုက်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုအချို့ကိုဖတ်ကြည့်၊ ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ငါစွဲနေစရာမလိုပါဘူး။ Porn and mast ဟာငါ O'd လုပ်ဖူးတဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ။ !
ကျွန်ုပ်စွဲနေလျှင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းအားကျွန်ုပ်သိသမျှအနေဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်ဆက်သွယ်သည်။ ဒါအရမ်းရှင်းလာတယ်။ ပြီးတော့နောက်ထပ်သက်သေပြနိုင်တာကငါဟာလုံလောက်တဲ့အမာခံမသွားနိုင်သောကြောင့် ၁၀၀% သောစိုက်ထုတ်မှုများကိုငါတောင်မှမရရှိနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်သည်းကတော့ ybop ပေါ်မှာ dopamine တုန့်ပြန်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အဆုံးမှာပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက် 100+ ကျော်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဗွီဒီယို ၃-၅ လောက်ပြေးနေတယ်။ မဟုတ်ရင်ငါအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။ O. ကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
LINK - ဒီပြproblemနာကိုငါ့ဘဝမှာမတွေ့မချင်းငါဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာငါပြီးသားအလုပ်လုပ်ကိုင်, 26 အသက်အနှစ်ဖြစ်၏။ ငါမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမ problemas နဲ့အကြီးအငယ်စဉ်ကလေးဘဝရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည်4နှစ်ပေါင်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ငါ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ ED ပြproblemနာပေါ်ပေါက်လာသည်အထိသူမနှင့်အားလုံးအဆင်ပြေသည်။ ငါဒီပြproblemနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိခဲ့ဘူး၊ ငါအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝပျက်ပြားစေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကငါကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအလွန်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီ ED ပြproblemနာကြောင့်အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ ငါဒီပြproblemsနာတွေနဲ့မကြုံခဲ့ရဘူး၊ ဒီပြproblemနာကိုသယ်ဆောင်ရတာဘယ်လောက်နာကျင်ပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းမှန်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကောလိပ်ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်မယူနိုင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းမြင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၌သူငယ်ချင်းများနှင့်အရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဤပြproblemနာကကျွန်ုပ်ကိုစတင်ရိုက်နှက်နေသည်။ ငါဒီနှစ်အကြောင်းရင်း, ဒါမှမဟုတ်ဒီ ED ၏အကြောင်းရင်းများထဲကတစ်ခု porn နှင့် PO ခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ လူရာပေါင်းများစွာရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါအရာရာတိုင်းဟာငါ့အတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိလာတယ် ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိဖို့၊ ငါ့ဘဝပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့နဲ့ကြီးပြင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကတစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာသွေးဆောင်မှုကငါ့ကိုရိုက်နှက်တယ်။
ငါစွဲလမ်းမှုကိုငါတကယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ပညာရှင်ကိုတစ်ပတ်မှာတစ်ကြိမ်သွားမယ်။ ဒါကြောင့်ငါဒီ post မှာခဏခဏရေးမယ်၊ ဒီခရီးအကြောင်းပြောနေတာနဲ့ငါနဲ့ဆင်တူတဲ့အရာတွေကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့တခြားသူတွေဆီကအထောက်အပံ့ရတယ်လို့ခံစားမိလို့ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်။
ထိုစကားများသည်ကျွန်ုပ်ကိုဒီရက် ၉၀ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးသွားနေစေသည့်စကားလုံးများဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းကို ၁၄ ရက်တိတိရိုက်နှက်မည်ဖြစ်ပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုထပ်မံပြုလုပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤသို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုဤစကားများကသတိပေးသည်။ ငါအရမ်းစိတ်ပျက်အားလျော့သွားတယ်၊ လိင်ကိစ္စကငါ့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားစေဘူး။ ငါကောလိပ်ကျောင်းမှာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရတာ၊ တကယ်ကိုအဓိပ်ပါယျမရှိတဲ့အတှေးအချေါရှိတယျဆိုရငျအခုအခြိနျမှာအနားယူပွီးပျြောရှငျရုံသာမဟုတျဘူးဆိုတာသတိရတယျ။ ငါကောလိပ်ကျောင်းမှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့မိန်းကလေး (၁၀) ယောက်တောင်မှ ၁ ယောက်ထဲကိုငါသာစာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကငါလုပ်ဖို့ porn အကြောင်းစဉ်းစားခဲ့လို့ပဲ။ ငါအဲဒီမှာအရမ်း desensitized ကြောင့်ငါ BJ သို့မဟုတ် HJ သို့မဟုတ်ဘာမှထံမှဘယ်တော့မှမ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဟာ PIV ရှိမိန်းကလေး ၁၀ ယောက်နဲ့အတူရှိနေတာတောင်မှအပျိုလိုခံစားရတယ် (ငါမူးနေတုန်းမှာ - မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံကောင်းရှိသင့်တယ်) ။ ငါမတူညီတဲ့မိန်းကလေး (၁၀) ယောက်နဲ့အတူအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမူးနေတုန်းမှာသူတို့အားလုံးဟာထပ်ပြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးငါ့ရဲ့ ED / DE နဲ့အဲဒီမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကအဆီတွေများနေလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံကိုတောင်မနှစ်သက်ခဲ့ဘူး။
ငါကြာသပတေးနေ့ကမြို့ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့နေပြီ။ မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေမယ်၊ ငါမတွေ့ဖူးသေးတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတချို့နဲ့အတူနေမယ်။ ဒီအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအားလုံးကိုငါ့ကိုမေ့ပစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ရက် ၉၀ ပြည့်တဲ့အထိ reboot မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ ငါဟာဘယ်တော့မှလိင်ကိုဘယ်တော့မှပျော်မွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမသိခင်အထိပြန်လည်ပြန်လာခဲ့သည်။ ငါ P မပါဘဲ ၂.၅ လကြာသွားပေမဲ့တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် MO'ing ဖြစ်နေပေမယ့်တိုးတက်မှုမရှိပါဘူး ကျွန်တော့်မိသားစု မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှမသိသောမြို့ငယ်လေးတစ်ခုတွင်အိမ်၌ငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာသောကြောင့်မြို့ကြီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားအလုပ်များစေနိုင်လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းတစ်လအကြာတွင်အလုပ်စတင်လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ကူညီလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့်ငါ PMO စွဲအမျက်ဒေါသနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ငါစိတ်ဆိုးချင်ကြသောကြောင့်ငါမစတင်မှီအနည်းဆုံး 90 ပတ်တိုးတက်မှုလုပ်ချင်တယ် အလုပ်မှာတစ်စုံတစ် ဦး မှာသို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပစ်ခတ်ရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ငါဒီ porn သွေးဆောင် ED ရှိသည်သောသဘောပေါက်လာပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အထိအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုနေစဉ်။
ငါဒါကိုအရင်ကမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာငါကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝစိုက်ထူစရာတောင်မလိုဘဲနေ့တိုင်းအော်ဂဇင်ကိုပြုခဲ့ဖူးတယ်။ အော်ဂဇင်ကိုမလိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းကိုနှိုးဆွခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့စိုက်ထူမှုမရနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာငါပါးရိုက်လိုက်တယ်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီ၊ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ရောဂါရှိတယ်လို့သိလိုက်ရတယ်။ နှစ်တွေအတော်လေးပြင်းထန်စွာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ငါစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အလိင်ဆက်ဆံကြောင့်ငါမျှော်လင့်ထားကဲ့သို့သောဘာမျှမဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ပါးစပ်၊ သူမ၏ pussy သို့မဟုတ်သူမ၏လက်များတွင်စိုက်ထူ။ မရနိုင်ပါ။ Blowjobs တွေကသူတို့ထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်သလို၊ လိင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ကွန်ဒုံးများသည်မသက်မသာဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောနာကျင်မှုခါနီးတွင်ရှိသည်။ ငါ ၁/၃ စိုက်ထူတာတစ်လျှောက်လုံးမဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီနေ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ED နဲ့ porn စွဲလမ်းမှုရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ TED ဆွေးနွေးပွဲဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်မှတ်မိခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့စာမူအနည်းငယ်နဲ့ဂျာနယ်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီ။ ဒီမှာရှိတဲ့တခြားနေရာတွေနဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့ post အသစ်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ငါကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်လိုက်ပြီလို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုပဲအတည်ပြုလိုက်မယ်။
1. ပုံမှန်အားဖြင့်လှည့်တဲ့အခါမှာပြီးပြည့်စုံသောစိုက်ထူရ။ ငါ နိုင် သူတို့ကိုရ, ဟုတ် ... ဒါပေမယ့်ငါအများစုကိုငါမကျင့်။
၂။ ပုံမှန်မအိပ်ဘဲပုံမှန်အိပ်ရာထပါ လွန်း ) တဦးတည်းရဖို့အများကြီး။
၃။“ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု” မရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ငါကိုယ်တိုင်အော်ဂဇင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမလုပ်နိုင်ပါ
4 ။ နံနက်အော်ဂဇင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စိုက်ထူအများအပြားဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူရောက်ရန်တစ်နာရီယူနိုင်ပါသည်
5 ။ ငါကအလွန်ခက်ခဲ ejaculating ပြီးနောက်နံနက်ယံ၌တစ်ဦး 2nd စိုက်ထူရဖို့ရှာတွေ့, တဖန်ဖြစ်ချင်အသက်အရွယ်ကြာပါသည်။
•ငါ (ဒီတစျဦးအပျေါနေဆဲသေချာမသိပေမယ့်ငါမထင်) bi ထင်
•အခု5လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါရွံရှာဘွယ် (တကယ်အစွန်းရောက် / စုစုပေါင်းပစ္စည်းပစ္စယ) တွေ့သောပစ္စည်းပစ္စယစောင့်ကြည့်
အိုကေ, ဒါကြောင့်ငါ "degraded" ငါထို့နောက်ငါလိင်တူချစ်သူ / bi / trannies စာရင်းပြုစုသောအဘို့အကြှနျုပျ၏တောင်းပန်။ ဒီဟာတွေဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံအမျိုးမျိုးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်စံနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပြီးလျှော့ချလိုက်တာပါပဲ။ လိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးတုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားနိုင်ပါတယ်။ ငါနီးပါးဆိုလိုဘူး တခုခု.
ဤအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ငြင်းပယ်သည်။ '၂၄ နှစ်မှာငါစိုက်ထူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငါလက်မခံနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်ပန်းဖို့မစဉ်းစားတော့ဘူး။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်စာသားဆန်သောအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးလုံးဝစိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိထိရောက်ရောက်လှည့်စားဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဖို့၊ အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာဖို့လိုတယ်။ အခုငါရိုက်လိုက်တာနဲ့ငါ 24/1 စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းတယ်။ ငါနင့်လိုပဲငါခံစားရတယ်။ ဒါဟာ 3st ဂီယာသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုမှာကပ်ရောက်လာကဲ့သို့ဖြစ်၏။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမဖယ်ရှားသေးပေမယ့်ယခုငါစလုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်။ ငါမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတာသိပေမယ့်မနေ့ကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုငါစတင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ငါမပျောက်သေးသေးဘူးလို့ငါပြောရမယ်။ တကယ်တော့ငါကနောက်တဖန်порноကိုကြည့်ပျော်မွေ့ပါဘူး, ငါကအရမ်းပျင်းစရာနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲရှာပါ။ ကောင်မလေးတွေကအမြဲတမ်းပျမ်းမျှမကောင်းဘူး၊ ယောက်ျားတွေကအမြဲရွံစရာကောင်းတယ်၊ ကင်မရာမင်းကအမြဲတမ်းမကောင်းဘူး၊ စသည်တို့ပဲ။ ငါအခုမှငါလိုချင်တာကိုဘယ်တော့မှမရဘူး၊ ငါရှာနေတဲ့ "တိကျစွာ" ဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ဘူး
ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ဒါကငါ့ဇာတ်လမ်းပဲ။ ရှည်လျားသောပို့စ်အတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။ “ ငါ့စိုက်ထူမှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်မည်မျှကြာမည်နည်း” စသည့်မေးခွန်းများမေးရန်မလိုပါ။ ငါကအခြားပို့စ်အားလုံးမှပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုငါမြင်နိုင်သောကြောင့်
ငါ့မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ လူတချို့ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ကျော်သွားမယ်လို့ပြောနေကြတယ်။ တကယ်လား ဒါကအရမ်းကိုရှည်လျားနေပုံရတယ်၊ ငါအော်ဂဇင်မရှိဘဲတစ်နှစ်ခွဲဝက်မသွားနိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင်ငါက "ကိုသိအတွက်" သူတို့အဘို့မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ TED စကားပြောဗွီဒီယိုနှင့်ဂယ်ရီ၏ YouTube ဗွီဒီယိုများတွင်သူသည်အသစ်သောစိတ်လှုပ်ရှားစရာအသစ်တစ်ခု၊ အသစ်စက်စက်အမျိုးအစား၊ အစွန်းရောက်မှုအသစ်စသည်တို့ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေတတ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့ဆိုလျှင်မိန်းကလေးများနှင့်ဘာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိသနည်း။ ငါဆိုလိုတာကမိန်းကလေးစစ်စစ်ဟာအသစ်သောစိတ်ခံစားမှုအသစ်တစ်ခု (သို့) လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးစိတ်မပျော်မရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့တယ်။
တည်းဖြတ်ခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံသောအခါအော်ဂဇင်သို့ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိကြောင်းကိုလည်းသတိပြုပါ။ ငါတကယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသုတ်ရည်လွှတ်လိမ့်မယ်လို့အမြဲစိတ်ကူးခဲ့တယ်၊
နယူးအဖွဲ့ဝင် 34 ရက်ပေါင်းမျှ PMO, ED ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ, နေ့ 1 ထံမှ flatline ။ (ကြီးမားသော walloftext, တောင်းပန်)
လွယ်ကူပါတယ်! ငါပုံမှန်အတိုင်း lurker နိဒါန်းကျော်သွားပါနှင့် get go ကနေငါ့ခရီးကြိုးစားရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအင်တာနက်စန်းပွင့်မှု၏ဆိုးကျိုးများကိုခံစားနေရသည့်အထီး (နှင့်အမျိုးသမီးများ) ၏ပုံမှန်ကွင်းဆက်တွင်ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးလုံးလျားလျား porn / fap စွဲလမ်းသူဟုမယူမှတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်း ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းအခြေအနေများကပုံမှန်နှင့်ထိခိုက်နစ်နာစေသည့်အလေ့အထဖြစ်လာသည်။ Porn ဟာ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကတည်းကတော်တော်လေးကိုစံနမူနာကောင်းခဲ့တယ်။ အစွန်းရောက်လွန်းတာကိုမကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ငါကပွဲတိုင်းအတွက်တစ်ပြားတစ်ချောင်းရရင်ငါ့မိသားစုရဲ့နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေဘယ်တော့မှပြန်အလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ငါပြောနိုင်ပါတယ်။
ငါတက္ကသိုလ်ကာလအတွင်းငါ့အဘို့ဤအရာများစွာကိုစတင်စဉ်းစားမိပါတယ်။ ငါ (လိင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်) ပထမနှစ်တွင်အပြီးငါ၏အ GF နှင့်အတူပြိုကွဲခြင်း, ပေါင်းပင် fap နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ငါ့အသစ်တွေ့ရှိခဲ့လွတ်လပ်ခွင့် (သူမအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ခဲ့သည်) ... ကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဝက်နှစ်ဆယ်အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကာလအတွင်း ၂ နှစ်စီကြာရှည်ခဲ့သည် (၁၈ - ၂၂) ။ ငါ DE သည်ကြိမ်ဖန်များစွာမှတ်မိနိုင်သော်လည်းလိင်သည်အမြဲတမ်းကျန်းမာခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ကျွန်မရဲ့လိင်စွမ်းရည်ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိပြီးမိန်းကလေးတွေကတော်တော်လေးကျေနပ်ရောင့်ရဲကြတယ်။
ငါနှင့်ငါ့မိန်းကလေးဟောင်းအကြားအကွာအဝေးနှင့်အညီ၊ ငါလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုဆီသို့စတင်စိတ်ဝင်စားလာသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အကျင့်ဆိုးအသစ်များကိုစတင်ခံစားလာရသည်။ နှစ်တွေမြန်မြန်ရှေ့ဆက်ပါ၊ ဘွဲ့ရပါ၊ ကျွန်မအရင်ကတည်းကလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုရသေးပါ။ ငါခက်ခဲတဲ့အချိန်, စိတ်ဓာတ်နှင့်အတူရုန်းကန်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လူမှုရေးလောကနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၏ဖိအားတိုးပွားလာ။ ကံမကောင်းစွာကျွန်ုပ်၏အတိတ်မှနတ်ဆိုးအနည်းငယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြီးထွားရန်မလွယ်ကူ ခဲ့၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အစတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်အနည်းငယ်မှေးမှိန်လာခဲ့သည်။
GF ကစားသမားများ မှလွဲ၍ မည်သည့်အတွေ့အကြုံမှမရှိသော်လည်းဤချွတ်ယွင်းနေသောကာလနှင့်ပတ်ပတ်လည်၌တစ်ညတာရပ်တည်ချက်ဂိမ်းထဲသို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လွှင့်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးသုံးယောက်၊ ED ကိုဖျက်ဆီးသည့်ဝိညာဉ်၏အကောင့်သုံးမျိုး။ မကြာခဏဆိုသလိုငါဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ရာခင်းပြီးတစ်နေရာရာကိုပြောင်းရွှေ့မသွားဘဲအစားထိုးခံရမယ့်အရှက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် '၆၀%' အစွမ်းသတ္တိအပေါ်မျက်နှာကိုလဲလျောင်းနေတယ်။
နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ သူဟာငါနဲ့ nekkid ကိုရခြင်းရဲ့အပျော်ဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူမသည်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး 😉ထူးဆန်းတာကသူမလည်းအိပ်ခန်းထဲမှာအတော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတူကိုယ်ပိုင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်လို့အမြဲတမ်းအသိအမှတ်ပြုခံရပေမယ့်မလုံခြုံမှုကဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ လပေါင်းများစွာလှည့်စားခြင်းနှင့်ငါ့ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအခါသမယမှမတက်ပြီးနောက်, ဒါဟာယခုသတင်းဟောင်း။
ကျွန်ုပ်၏အမှောင်မိုက်သောနေ့ရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိင်စိတ်နိုးထသူများသည်မိမိကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်အရာနှင့်တူသောခံစားချက်များကိုမေ့ပစ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ညကျော်ကျော်သည်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ 'နိဂုံးချုပ်ခြင်း' သို့ရောက်သွားသည်။ ငါဟာလိင်တူချင်းဆက်ဆံသူတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့လိင်တူချစ်သူအဆင့်တောင်မှတောင်မှလိင်မှုကိစ္စနဲ့အဆင်ပြေသော်လည်းဘယ်တော့မှတောင်မှ HOCD ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Bla bla, သြဂုတ်လ 16 ရက်ပတ်ပတ်လည်လာ။ NoFap ၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပဲချက်ချင်းဝင်ပြီးအပတ်အနည်းငယ်မှာဒေါသထွက်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ငါပင်အဆုံးသတ်နှင့်ဤအလွန်အလွန်ငြိမ်ဝပ်စွာနေတဲ့ကောင်လေးကနေလာမယ့်တညဉ့်ကလပ်အပြင်ဘက်ငါ့အနှောင့်အယှက်အိမ်မှာလည်ပင်းညှစ်သတ်ခြင်းငှါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၃၄ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုင်တွယ်မှုသည်ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပိုမိုထိခိုက်လွယ်သည်။ နံနက်သစ်သားသည်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်နှင့်စွမ်းအင်ပြည့် ၀ ခြင်းမရှိလျှင်အခြားနေ့ရက်များတွင်ဖြစ်ပျက်တတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်နှိုးစက်ဆက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုတွင်အိပ်။ အားပေးနေနိုင်သည် အတွင်းသားရဲ - fap လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ထို libido ခံစားမှုကိုထပ်မံခံစားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ဤအနိမ့်ဆုံးခြေလှမ်းများနေသော်လည်း, ငါနေဆဲအများစုဟာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ကြီးမားသောအမှုခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်လိင်စိတ်ကပိုကောင်းတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်နွေရာသီကိုအိမ်မှ (Im Graphic Designer) အလုပ်မှထွက်ခွာသော်လည်းကျွန်ုပ်အားငွေမပေးရသေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အားလပ်ချိန်သည်မရှိတော့ပါ။ လက်တော့ပ်ကနေရက်အတော်ကြာအလုပ်လုပ်နေရင်တောင်ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုဖို့တွန်းအားတစ်ခုလိုနေသေးတယ်။ ငါကတခြားယောက်ျားလေးသုံးယောက်နဲ့အတူနေတယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်လိင်အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်မှုဟာကောင်းကောင်းမကန်နိုင်သေးဘူး။
ယခုတွင်ငါသည်အာရုံစူးစိုက်မှုပျောက်ဆုံးသွားသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ 'သုံးရက်အတွင်းနှင့်သုံးရက်အကြာတွင်ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားထားချက်များစွာကိုမတွေ့ရသောကြောင့် go "ဟူသောစကားလုံးမှမျောလွင့်နေသောသူများအတွက်အလင်းအနည်းငယ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခြင်္သေ့ 'ချည်။ အကယ်၍ သင်ဒီကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ရွှင်လန်းပါ၊
စိုက်ထူ Disfunction (ED) စောင့်ကြည့်ရေးချည်
စာသားမပါဘဲသန့်ရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ချဉ်းကပ်ချင်ပါတယ် ငါအောက်ကပုံစံကိုပေးပါလိမ့်မယ် (ပြင်ဆင်ချက်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်နှင့်ငါ post ကိုတည်းဖြတ်ပါလိမ့်မယ်) ။ ငါအလုံအလောက်တင်ပြီးနောက်စာရင်းအင်းအကျဉ်းချုပ်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကအရည်အချင်းပြည့်မီစေတနာ့ဝန်ထမ်းလျှင်သူကပိုကောင်းပြုလိမ့်မည်။ ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးထားတဲ့အောက်က code အားလုံးကို copy ကူးထည့်ရုံသာဖြည့်ပါ။ စာရေးပြီးမှတစ်ပြိုင်နက်စာလုံးအပြုံးနှင့် sorting sorting အားလုံးထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
အစနှင့်အခြေအနေ - ၁၃ (မဂ္ဂဇင်းများ)၊ ၁၅ နှစ် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနီးပါး)
ED လက္ခဏာတွေ: အဘယ်သူမျှမနံနက်စိုက်ထူမျှစိုစွတ်သောအိပ်မက်, ဆွဲဆောင်မှုအမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအများပြည်သူမအလိုအလျောက်စိုက်ထူ, လိင်တံလိင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းအပြည့်အဝခက်ခဲသည်မဟုတ်, တစ်မြို့အနီး flaccid ပြည်နယ်အတွက် ejaculate နိုင်ပါတယ်။
NoFap ကုသမှုသို့အချိန်: ပထမဦးဆုံးယခု 30 မှာ 13 ရက်ပေါင်းကြိုးစားကြ
NoFap ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်: ယခုအချိန်အထိအဘယ်သူအားမျှ
ဒါကြောင့်ယခုသင်အောက်က code ကို paste ကူးယူပြီးကျွန်တော် quantitative ဒီခြေရာခံနိုင်အောင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ 🙂
ကျွန်ုပ်သည် ၂၉ နှစ်ရှိပြီး ၁၄/၁၅ အရွယ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးလူများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပင်စတင်ခဲ့သည့်တိုင်၎င်းသည်အလွန်အစွန်းရောက်သောအရာများဖြစ်သည်။ IRC မှတဆင့်ရူးသွပ်ခြင်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ရအောင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုမသိခဲ့ပါ။
ထိုအရပ်မှငါရပ်တန့်ဘယ်တော့မှငါပြန်ရှာနေမှန်းငါဖြစ်ကောင်း, တော်တော်စောစောပိုင်းအပေါ် fetish ပစ္စည်းပစ္စယသို့ 15 ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်တယ်။
ကံကြမ္မာကြောင့်ရှိသည်မယ်လို့သကဲ့သို့ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ဖြစ်ခြင်းငါ့ကိုတားဆီးထားတဲ့အနည်းငယ်မွေးဖွားချွတ်ယွင်းနှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ဆေးပညာအသုံးအနှုန်းအခြေခံအားဖြင့်နောက်ကျောအပေါင်းတို့သည်လမ်းလာအရမ်းကြပ်ဖြစ်ခြင်းဟာယောက်ျားဖြစ်သော Phimosis ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကြောင့်နာကျင်မှုမှထိုးဖောက်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပြီးနောက်ကရနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအကြောင်းကို 16 ၏အသက်အရွယ်ကနေအမျိုးမျိုးသောတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။
မှားအဘယ်အရာကိုမျှမစိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့်အဲဒါကိုထွက်တွက်ဆဖို့ 20 များ၏အသက်အရွယ်မှီတိုင်အောင်ငါ့ကို ယူ. ထို့နောက်နောက်ဆုံးတွင်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အရေဖျားလှီးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ 20 များ၏အသက်အရွယ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ဖြစ်ခြင်းမရှိပဲပေမယ့်မကြာခဏအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏5အစိုင်အခဲအနှစ်နှင့်အတူရတယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်တစ်လျှောက်မှာကျွန်မဟာရည်းစားတွေအများကြီး၊ ရေရှည်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်မရဲ့မျှတတဲ့ဝေစုထက်ပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးပေမယ့်တစ်ခါတလေမှာကျွန်မရဲ့လိင်တံထဲမှာသုတ်ရည်လွှတ်မှုမပြည့်စုံသေးခင်အထိငါခံစားမှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ ။ သေချာတာပေါ့ Porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ချလောက်လောက်အစွမ်းထက်မဟုတ်ပါဘူး !!
ငါကငါနှင့်အတူရှိခဲ့သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုချန်ထားလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလုံလုံလောက်လောက်မ ၀ င်စားမိစေရန် (သို့မဟုတ်) လိင်ကိုအမှန်တကယ်မနှစ်သက်ပါ။
ထို့နောက်ငါ ၂၅ သို့ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဆက်လက်ပြင်းထန်လာသည်နှင့်порноသည်အလွန်အစွန်းရောက်လာသည်။ ငါနောက်ဆုံးမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုစိုက်ထူမှုအတွက်ရုန်းကန်စတင်ခဲ့ပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါငါမထနိုင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကို porn မှာတွေ့ခဲ့တယ်၊ Thread လင့်ထားသည်
* ကျွန်ုပ်သည်အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ်တွင်အထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သည့်အသက် (၂၀) ​​အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ *
ဦး နှောက်ကရေချိုးကန်ထဲလှည့်ဖျားဝင်ကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်ပုပ်နေခဲ့ဖူးတယ်။ အရူးဘာသာရေးမိဘတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှလူမှုရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုလည်းမရှိခဲ့ဘူး။
ငါသည်အလျင်အမြန် 16 များ၏အသက်အရွယ်န်းကျင်မှာအဝတ်အစားဘရိုရှာ, ထို့နောက်ညစ်ညမ်းကွန်ပျူတာဂိမ်း (DOS ကို) ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အင်တာနက်ပေါ်ကို။
ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းကယ့်ကိုအနိမ့်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ငါရုပ်ဆိုးတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့နှင့်ဘယ်တော့မှတစ်ချိန်ကငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာကြောင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးရှိခဲ့ (သို့မဟုတ်ဒီတော့ငါထင်) ။
ငါအလိုဆန္ဒကိုလည်းငါမိသားစုပြိုကွဲမြင်နေပြီးနောက်ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးပေလိမ့်မည်ထင်သောမိန်းမတို့၏ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိခြင်းမကြောင့်မဆိုဆက်ဆံရေးအတွက်စတင်မရှိဘဲတက္ကသိုလ်3နှစ်ပေါင်းရှောက်သွားလေ၏။ ဒီသင်တန်းငါ၏သညာ skewed ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံတာဟာမိနစ် ၃၀ အမြန်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အစောင့်အကြပ်နဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ အိမ်ကိုကားမောင်းရင်းငါငိုခဲ့တယ်။
ငါထို့နောက်ငါအနည်းငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ clubbing ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အခါတိုင်း 6-7 အမျိုးမျိုးသောတန်ဆာမိန်းကလေးများနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖို့သွားလေ၏။
ဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လှပသောအမြိုးသမီးမြား (ဒီတိုင်းပြည်အတွင်းဥပဒေရေးရာသောမြင့်မားသောလူတန်းစားစောင့်အရှောက်) နဲ့လိင်ရှိသည်မယ်လို့အခါတိုင်းငါအခြေခံအားဖြင့်လိင်ကနေပျော်မွေ့ခြင်းမရှိရရှာဖွေနေနှင့်သူတို့၏အလောင်းများကိုမှာထိမယ်လို့အဲဒီမိန်းကလေးငယ်ငါခဲ့ကြသည်သော်လည်းလက်တွေ့ကျကျပျင်းစရာများနှင့်သာမန်ခဲ့သည် တစ်ဦး 12 နှစ်အရွယ် horny ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်အကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့တယ်။
ငါသည်ဤအချက်မှာချွတ်မယ်နှိုးဆော်သံခေါင်းလောင်းထိုးဖူးသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါလိင်ကို un-စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်မပျော်မွေ့ရရန်မိန်းကလေးမှစိတ်လှုပ်ရှားမှုချိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်မှာအပြစ်တင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၄ လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်အရက်သောက်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူအလုပ်လုပ်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါသူကကျွန်ုပ်အားသတင်းပို့သည်။ ကျွန်ုပ်သူမကိုချိန်းတွေ့ခြင်းများကိုယူခဲ့ပြီးသူမကိုပင်မနမ်းခြင်းသို့မဟုတ်မထိခြင်း ။
နောက်ဆုံးတော့သူမသည်ငါ့နေရာအရပ်မှကျော်တို့သည် လာ. ကျွန်တော်ငါ့ကိုသူမ၏အကြိမ်ပေါင်းများစွာ fingering နှင့်သူမ၏အော်ဂဇင်အောင်နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ထားတဲ့ထွက်စေတော်မူ၏။
ဒါကအကြိမ်အနည်းငယ်အဘို့အပေါ် သွား. နောက်ဆုံးမှာကျနော်တို့အတူတူအိပ်ရာရှိကြ၏ငါသည်ဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူထွက်အောင်အကောင်းတစ်ဦးထက်ဝက်အဘို့ခဲယဉ်းတစ်နာရီရော့ခ်ခဲ့သညျ။
အဖြစ်မကြာမီငါအပေါ်တစ်ဦးကွန်ဒုံးထားသူသညျငါ၏ထိပ်ပေါ်မှာတယ်သကဲ့သို့ငါပျော့ သွား. , ငါ၏အလားဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤကြိုးစားခဲ့သည်အချိန်ငါ့ကိုသူမ၏ချွတ်ရတဲ့နှင့်အတူအဆုံးသတ်မယ်လို့ငါမူကားကြိုးစားပြီးနှင့်သူမ၏ဘာမျှမဖြစ်မည်ကို fuck ဆိုတဲ့မယ်လို့တဲ့အခါမှာပိုပြီးအနည်းငယ်ကြိမ်။
သူမသည်တကယ်စိတ်ဆိုးလေသူတို့တွင်အမည်များကိုအများကြီးငါ့ကိုခေါ် *'လိင်တူချစ်သူ' ** ငါသူမကိုဆွဲဆောင်မထားဘူး, etc *
ငါမျက်ရည်ကျသူမ၏အိမျတျောကို left နှင့်သာအဆက်အသွယ်ပြတ်မတိုင်မီခေတ္တမျှသူမ၏အနည်းငယ်ပိုပြီးအဆကိုမြင်တော်မူ၏။
*ဒါဟာငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်ပစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်, ထိုအူတစ်ပေကဲ့သို့ငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ ငါ * ချစ်မြတ်နိုးတဲ့နှင့်မိတ်ဆွေအဖြစ်ပျက်ကွက်လူအဖြစ်ပျက်ကွက်ခဲ့
ငါကအများကြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်၊ ​​ငါရပ်တော့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူမဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး၊
ငါဖြောင့် 4-5 နေ့ရက်ကာလအဘို့ masturbating မဟုတ်ကြိုးစားခဲ့နဲ့ကျွန်မတောင်မှဒီ Sub-reddit အပေါ်ပစ္စည်းပစ္စယကိုဖတ်ပြီးပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာငါပြန်သွားကြသည်မယ်လို့ကဘုနျးကွီးပါလိမ့်မယ်, ကိုယ့်တစ်ဦးအသည်းအသန် porn ကလစ်ကိုကြည့်ထံမှ orgasm နိုင်ဘူး။
ကို TED porn စွဲ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းပြောဆိုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကငါ့ကိုငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုလှည့်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်ကျွန်မအသက်တာ၏ကျန်ကိစ္စများအားဖြင့်နှောငျ့မည်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်စေတော်မူ၏။
ငါနောက်ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်နာရီ ၃၀ ကြာပြီ၊ ငါ့ porn အားလုံးကိုမဖျက်သေးပေမဲ့ဒီအချိန်ဟာကြီးမားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးခဲ့တယ်။
porn နဲ့ငါ့သမိုင်း: ဒီမှာများစွာသောလူလိုငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊ ဒါကတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေတယ်။
ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသောအပြာпорသည်“ fetish orgy” ဟုလုံခြုံစွာဖော်ပြလိမ့်မည်။ စုစုပေါင်းအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အတွက် ဒီသန္ဓေသားဟာကျွန်တော့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာတာကိုမအံ့သြပါဘူး ငါကြည့်ချင်တဲ့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတိုင်းမှာဒီအလေ့အကျင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာငါ့အတွက်တစ်ခုလုံးရဲ့အမြင့်ဆုံးအချက်ပဲ။
ဒါပေမယ့်အမှုအရာထိန်းချုပ်မှုထဲကရတယ်ကြောင်းခန့်3လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခန်းထဲမှာအပေါ်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာကိုတင်တဲ့အခါမှာခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းဖို့ Access ကိုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်; ထိုနေ့၏မည်သည့်အချိန်တွင်ငါရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းတစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့အကြှနျုပျ၏တံခါးကိုနှင့် PMO သော့ခတ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာတစ်နေ့အကြိမ် 1 မှ2နှင့်အတူစတင်နောက်ဆုံးမှာ3မှ6မှဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
ငါဘယ်လောက်လှည့်စားခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုစကားလုံးတွေကရှင်းပြလို့မရဘူး။ တစ်နေ့လျှင် ၆ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုမမှား၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ဒါကငါ့ကိုလိင်သားရဲလိုခံစားစေလိမ့်မယ်။ ငါလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိရင်ငါနဲ့အတူနေဖို့သူမကြိုးစားရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏, ကအားလုံးကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ် ...
porn-သွေးဆောင်ထုံနှင့် ED: အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများကနှိုးဆွပေးသည့်ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်တော်ရုန်းကန်နေရသည်။ ကျွန်မစိတ်ထဲတွင်သူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းသိသော်လည်း၎င်းသည်လိင်ဆွဲဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်တွင်းရှိလှောင်အိမ်ထဲတွင်ပိတ်ဆို့ထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ကျန်အပိုင်းများသို့ပျံ့နှံ့သွားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်မခံစားရနိုင်ပါ။
အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟာရွေးချယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် (ငါ့မှာမိန်းကလေးတွေအတွက်မြင့်မားတဲ့စံနှုန်းတွေရှိတယ်၊ အဲဒါကိုပြaနာတစ်ခုလို့မမြင်မိဘူး) ။ ဒါပေမယ့် YBOP ကိုမတော်တဆတိုက်မိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါကညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ၁၀၀% သေချာတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအစစ်အမှန်မိန်းကလေးတွေဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်။
porn အလွဲသုံးစားမှုကိုလည်းငါ့ "drive ကို" ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်ငါလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကပိုပိုပြီးပိုပိုများလာတယ်၊ ကောလိပ်တက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အားကစားရုံတက်တာထက်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ ကောလိပ်လည်းနေ့စဉ်ယဇ်ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ငါမုန်းတီးခဲ့တယ်။
ပြန်ဖွင့်: နှစ်ခု (ထို့နောက်6ရက်ကြာ Streak, ထို့နောက်ပြန်သွားကြသည်, တစ်ဦး7ရက်ကြာ Streak နဲ့အခြား relapse) ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်, ငါကလေးနက်ရရန်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါပထမ ဦး ဆုံးငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ porn အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ သင်ကျန်ရှိသည့်အရာတစ်ခုခုရှိပါကပြန်ဖွင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာအရက်သောက်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုပါပဲ Johnn Walker ပုလင်းတစ်လုံးကမင်းရဲ့စင်ပေါ်ကမင်းကိုကြည့်နေတယ်။
ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ: လောလောဆယ်ငါ reboot စလုပ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေက Sawaw လိုလိုတက်လိုက်သွားလိုက်တာပဲ။ ယခင်ကြိုးစားမှုများအရငါတောင်းစားရန်ခက်ခဲသည် (၂ ရက်မှ ၄ ရက်)၊ ထို့နောက်သူကပိုမိုလွယ်ကူပြီးတော့နောက်တဖန်ခက်ခဲရရှိသွားတဲ့။ သို့တိုင်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုလေ့လာရေးအထိ။
ငါအစပျိုးမှုကိုအလွယ်တကူခုခံနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိပေမယ့် flashbacks နှင့်အတူအချို့သောပြissuesနာများတယ်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးပမ်းမှုတွင်ရူးသွပ်စွာမောင်းနှင်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ သူတို့ကိုငါတွန်းလှန်ဖို့ပိုလွယ်ကူလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ကို restart ထံမှအကျိုးကျေးဇူးများ: ကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကိုအနည်းငယ်သာသေးငယ်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းအဲဒီလိုပြproblemsနာတွေရှိခဲ့တယ်၊ ဒါ့အပြင် PMO ကိုရှောင်ခြင်းကနေပိုကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ကျွန်ုပ်အသံကျယ်။ ရှင်းလင်းသောအသံကိုပြန်လိုချင်သည်
ကိုယ်ပိုင်ဂျာနယ် - ဤလုပ်ရန်အမှန်ပင်လိုအပ်သည်။
ok, ငါ့ကိုစတင်ရန်ကြကုန်အံ့။ အထိဖြောင့်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်ရှိပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောပြwithနာများအမြဲရှိခဲ့သည်။ အရာရာကိုခန့်မှန်းကြည့်ပါ၊ ဒီပြfriendsနာအကြောင်းသူငယ်ချင်းများနှင့်မိဘများကိုပင်ငါပြောရန်ကြိုးစားတိုင်း၊ လူတိုင်းကညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? ထိုအခါငါပထမ ဦး ဆုံးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့4နှစ်ခွဲကြာ။ ငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာအလွန်နက်ရှိုင်းစွာနဲ့လိင်ကိစ္စအလွန်မြင့်မားတဲ့အတွက် ED ပြproblemနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်နေဆဲ, ငါတို့တစ်နေ့လျှင်2ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ပင်တစ်ခုခုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်, ကမပြည့်စုံခဲ့သည်။ တစ်ခါတလေအချိန်မတန်မီအော်ဂစ်စ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင် porn နှင့် masturbation လုပ်ဖို့လိုနေတုန်းပဲ။
ငါရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ၊ ဤပြherနာအကြောင်းကိုပင်သူနှင့်စကားပြောခဲ့ဖူးသည်။ ကောင်းပြီသူမနေ့ကကဲ့သို့အဖြေကိုပြန်အမှတ်ရမိသည်။ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားဟာသာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…မင်းအဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းကလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံလိမ့်မယ်။ ” ငါဟာလူမှုရေးနောက်ခံကနေလာတဲ့ကျောင်းသူတစ် ဦး ပါ။ တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူမဟာချမ်းသာတဲ့လူမှုရေးနောက်ခံကနေပါလာတာ။
ငါအလေးအနက်ထားငါ ME တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းနေပါတယ်စိတ်ထင် FOR Crazy ဖွစျသညျသော်လည်း! ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း5ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်သွားသည်။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရပ်တန့်သွားသည်အထိလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် DAYS ၏ပြည့်စုံမှုကိုဖြုန်းတီးနိုင်သည်။ အဲဒီနောက်မှာအလုပ်မှာ၊ အားကစားရုံမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်တာ၊ လေ့လာတာတွေလုပ်ဖို့အချိန်ယူတော့တာပဲ။ ဒီ shit မှာတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာကိုအစကတည်းကသိခဲ့ပေမဲ့ငါဟာငယ်လွန်းပြီးမိုက်မဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူဟာဂရုမစိုက်ခင်မှာအတည်ပြုချက်ကိုတောင်းခံခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာငါဝန်ခံရမယ်၊ ငါစွဲလမ်းနေတယ် လုံးဝကို porn ကိုသာမကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းစေသည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အခါအော်ဂဇင်တောင်မလုပ်ဘူး။ ဒါကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါအရင်တုန်းကလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူး။
ငါအခု2နှစ်ထုတ်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ အချိန်တိုင်း၊ တူညီတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါ။ ၇ ရက်၊ ၁၀ ရက်ထွက်တယ်၊ နောက်တော့ fapping ကိုဆက်သွားပြီးမကြာခင်မှာပဲငါ porn ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်က Yourbrainonporn ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကလေးနက်တဲ့ဆုတ်ခွာမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါမကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့လေးကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ ပြnoticedနာကသတိထားမိသည်။ စက်ဝိုင်းပုံ - ၁၀ ရက်လောက်ရပ်လိုက်တယ်၊ စိတ်အပြောင်းအလဲတွေကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Fap ကိုတစ်ကြိမ်သာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ငါအဲဒီနေ့မှာအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။ တစ်ပါတ်ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်
အဘယ်သူမျှမလှုံ့ဆျောမှု, lazyness, ဦးနှောက်မြူ (ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ, ငါ၏အဆင့် BAAAAD ကျဆင်းနေပါပြီ။ ငါယနေ့ခေတ်ငါနောက်ဆုံးသူမြားအကြားဖြစ်၏တက္ကသိုလ် Med ကျောင်းသားတပြင်လုံးကိုလူအစုအဝေး၏ဒုတိယဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ )
ဒါကြောင့်ဒီဘဝပြောင်းလဲမှုအတွေ့အကြုံကို။ ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရဖို့လိုတယ်။ အရာအားလုံး။ ဒါကရိုးရှင်းတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမှထွက်ရန်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ကြီးမားသောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများသောအလုပ်များနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မြည်းကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
ပထမ - ဤရပ်ရွာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာအရူးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိပြီးအခုငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ။ ငါတစ်ယောက်တည်းခံစားခဲ့ရသောကြောင့်စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလေးနက်သောရောဂါများရှိခဲ့သော်လည်း၊ ငါကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပြaနာရှိသည်ဟုစဉ်းစားသော်လည်းကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းရှိသည်။
ဒုတိယအ: ငါအကူအညီလို။ လေးနက်သောအကူအညီ။ ငါဂုဏ်နအလုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်ကိုသိငါသည်ဤထဲကရရန်အလေးအနက်အစီအစဉ်ရှိသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာမကဘယ်သူ့ကိုမှမလိမ်ချင်တော့သောကြောင့်ငါဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုစောင့်နေသည်။ ငါလွတ်မြောက်ချင်တယ်၊ အမှားတွေကိုဝန်ခံတယ်။
ဒါကြောင့်ငါ ၁၁ ရက်နေ့မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမရှိဘူး၊ ထိန်းချုပ်လို့ရအောင် (pc ရော mobile မှာပါထိန်းချုပ်ထားတယ်၊ password မရှိဘူး၊ ဒါကိုမပြောင်းနိုင်ဘူး) ။
ဒါပေမယ့်လည်းငါယုံကြည်ပါတယ် (ပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံကစပြီးလူတွေဘာတွေထင်သလဲဆိုတာကိုငါမပြောတော့ဘူး၊ ငါမှန်တယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ လေ့လာမှုတွေကနောက်မှငါနဲ့သဘောတူလိမ့်မယ်။ ငါသေချာတယ်) ငါ MASTURBATION ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲနေပြီး၊ ။
ဒါနဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်တစ်နေ့လျှင် 1 အပေါ်ဖြစ်၏။
ငါသည်ဤခြေရာခံထား www.dontbreakthechain.com။ ဒီဘယ်သူ့ကိုမှကိုကူညီနိုင်ပါ။
ငါဆေးဘက်လယ်ပြင်၌ဖြစ်၏ကတည်းကငါဂုဏ်နဒီ shit နှင့်အတူဆုတ်ခွာခုနှစ်တွင်တစ်ဦးစနစ်တကျကြိုးစား modelize ငါထင်ပါတယ်။
ငါဆိုလိုတာကငါ့ဘ ၀ ရဲ့နယ်ပယ်အားလုံးမှာငါ့ကိုအရမ်းနာကျင်စေခဲ့တယ်၊ ၁၀ ရက်ဟာအလွန်ဆိုးဝါးခဲ့တယ်၊ ငါစိတ်ပျက်အားငယ်နေတယ်၊ ​​လေးလေးနက်နက်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ခံစားခဲ့ရသလိုငါခံစားခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုကိုအဆုံးသတ်ချင်ရုံသက်သက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်သလိုငါတောင်မဖော်ပြနိုင်ဘူး ။ စိတ်အပြောင်းအလဲတွေကကျွန်တော့်ကိုရူးသွားစေတယ်။
ဒါကနည်းနည်းကျပန်းနှင့်မြူဆိုင်းမိတ်ဆက်သည်, ဂျာနယ်၏နောကျကြှနျုပျကိုပိုပြီးစုံစုံနဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်စကားလုံးများကိုလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသူသည်ငါအခုအချိန်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုရှိရာ, (ငရဲထဲက !!) သင်ဤခရီးအတွက်ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ # ၅၆: ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၆ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးသောပုံသဏ္pornာန်ကိုနှစ်ဆကျော်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငါကြည့်လိုက်တာနဲ့မေ့သွားတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါဘာမှမကြည့်တော့ဘူး။
porn ကကျွန်မကိုမဖြည့်ဆည်းဘူးဆိုတာသိခဲ့ရတယ် ငါကြည့်နေတာပဲကောင်းကောင်းခံစားရတယ်ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုငါမဖြစ်စေဘူး။ ငါ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ငါ့ကိုကျေနပ်စေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မှန် (ဝါသနာများ၊ ကျောင်းများ၊ ခရီးသွားများစသဖြင့်) တွင်ဗဟိုပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖြည့်စွမ်းလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့ဘဝကနေပုန်းနေခြင်းကကျွန်တော့်အတွက်အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူး။
ငါဘတ်စ်ကားပေါ်တက်ပြီးချစ်စရာကောင်မလေးဘေးမှာထိုင်တဲ့အခါငါပုံမှန်အားဖြင့်စိုက်ထူရ။ ငါအရှိဆုံးလွဲချော်။ ညစ်ညမ်းမှုက ED ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာငါနားမလည်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအထက်တန်းကျောင်းတက်တာနဲ့တူတယ်။ ငါအခုအသက်ကြီးနေပြီ၊ ငါ ED မပါဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမရှိဘူး။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကကျွန်တော့်ကိုပျော်ရွှင်စေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမိန်းကလေးတွေကငါ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ ပိုဆိုးတာကတော့ငါသူတို့ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ကိုကျွန်မရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာပျောက်ကင်းစေမယ်လို့မျှော်လင့်ရုံမကဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာငါအဆုံးမဲ့ဆွခြင်း၊ အာရုံထွေပြားခြင်း၊ ငါဘဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားပါပဲ။
မင်္ဂလာပါစတား! ငါတစ်လလုပ်ပြီးပြီဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး !: PIED ကိုရိုက်နှက်တဲ့ကောင်မလေးအသစ်၊ နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုခံစားလာရတယ်။
nofap ၏ 30 ရက်။ မယုံ။ ယနေ့ငါလမ်း၌လမ်းလျှောက်သောအခါငါတကယ့်လူကဲ့သို့ခံစားရတယ်; ငါယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ လူတွေရဲ့မျက်စိကိုကြည့်တယ်၊ သူစိမ်းတွေနဲ့ကျပန်းစကားစမြည်ဝိုင်းဖွဲ့တယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပိုကောင်းတယ်၊ အိမ်အပြင်ဘက်ကနေထွက်ပြီးအရာရာကိုလုပ်ဖို့၊ နေရာအသစ်တွေစဖို့အမြဲတမ်းလိုချင်တယ်။
ကြှနျတေျာ့ဇနီးငါ့ကိုထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာကျွန်မကြောက်မက်ဘွယ်သောစိတ်ကျရောဂါရှိ၏ ယနေ့ငါသည်ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူသစ်တစ်ခုဘဝကိုစတင်ဖို့အဆင်သင့်တဲ့လူသစ်ဖြစ်၏။ နံနက်သစ်သားအိပ်ရာ၌ငါ့ PIED တော်တော်များများ PIV လိင်ဆက်ဆံမှု, ဒါပေမယ့်အဓိကဘာမျှစဉ်အတွင်းစိုးရိမ်စိတ်အနည်းငယ် မှလွဲ. သွားပြီဖြစ်ပါတယ်, နောက်ကျောမနက်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသင်ယောက်ျားတွေနှင့် nofap အသိုင်းအဝိုင်းမှကျေးဇူးတင်စကား။
ငါ PMO မှအပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်သွားရန်ရှည်လျားသောလမ်း (လိင် drive ကိုအနည်းငယ်နိမ့်နေပြီးအချို့မှာထုံထိုင်းနေခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်မှု၊ dopamine receptors regrowing …သင်သိပါသည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နောက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သောရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုမျှော်လင့်သည်။
အကောင်းဆုံး - ငါ fap လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူး၊ ဒါကအဲဒီ option တောင်မှမရှိဘူး။
TL; DR: nofap ကငါ့ဘ ၀ ကိုတဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်၊ ငါပြန်လှည့်မကြည့်ဘူး။